မတ်သာင်။ ၀ှတ်ဝုင်၊ ဒှဇြေမ်ပါ ၂၉၊ ၂၀၀၇
ရန်တၞံကုဪစိုတ်စရိုတ်ကောန်႞ာ်မန်တံ သဂွံလှုင်တိုန်ညိဂးတဲု နဲာမတ်သာင် စန်ဒက်ကောန်႞ာ်ဂမႜိုင် သွက်သဂွံပၞ၀်ဓရ်ဂှ် ကောန်႞ာ်ဂမႜိုင် စိုတ်လုပ်စတဲု ပံင်ပကောံပၞ၀်ဓရ် ပႛဲဘာမန်ဝှတ်ဝုင်ရ။ ကွးဘာမကုဪအခိင်ပၞ၀်ဓရ်မာန်ဂှ် နဲာမတ်သာင်ဖျေံလာပ်ရောင်မဒ်ှတဲု သွက်ကောန်႞ာ်သၞတ်ဂမႜိုင် သဂွံဒ်ှအထံက်အပင်လညာတ် ပံက်ကုဪတိုက်ဂြပ်မွဲ မႝုံယၞု Kid Meditation Bank မွဲရောင်ဂှ် လၜထ႟းလ၀်ကုဪကောန်႞ာ်ဂမႜိုင်ရ။
မာံဝါန်- ကွးဘာမန် ညးမဂွံအခေါင်ဆုဪဂဗကုဪသမ္မတဗုသှ်ျ
မတ်သာင်။ ၀ှတ်ဝုင်၊ ဒှဇြေမ်ပါ ၃၀၊ ၂၀၀၇
နူသႝာံမတဲုကႜုင်တေံ ကွးဘာမန်နူတွုဪရးခေ၀်ရလာင်ဏာ(သၞ၀်ကျာ) ဂွံဒုင်ရဲုစ်ှနဒဒ်ှကွးဘာစောန်သကာ လုပ်လၞိဟ်အာ ပႛဲစရင်အလံင်ကႛိုပ်သ္ကိုပ်တၞိတဲု ပႛဲသႝာံဝွံ တေၞင်တေၞင်တၞဟ်တၞဟ် ကွးဘာမန်မွဲနူဝှတ်ဝုင် ယၞုဍေံ မာံဝါန် (မဒ်ှကောန်မေန်သ၀်မိလှကျှ၊ အာယုက် (၁၄)သႝာံ၊ Northrop High School) သဂွံဒုင်ရဲုစှ် နဒဒ်ှကွးဘာအလံင်ကႛိုပ်သ္ကိုပ်မွဲပႜန်ရောင် ဂွံပရိုင်ရ။ အစှဇန်ရဲုစ်ှဝွံ ကႜုင်နူကုဪသၝိစႜတ်တိုက်ရိုက်တဲု ဂကောံ (Congressional Leadership)ဂှ် ဒုင်လ၀်လျိုင်ရ။ ပႛဲအစှဇန်ဂှ် မွဲသႝာံမ္ဂး ကွးဘာအမေရိကာန်အလုံကၞိန်ဍုင်ဗႝတ် (၃၀၀) သဂွံအခေါင်အာဝေင်ဍုင်ရာဇဌာနှဝါသျှေင်ထိုန်ဒှသှတဲု ဗီုလုဪသၝိစႜတ်ထ၀်ကေႜာန်ကမေႜာန်၊ ဗီုလုဪဂကောံအလုဪသှကေႜာန်ကမေႜာန်ဂှ် သဂွံအခေါင်ဂေတ်ဗုဪဝေင်ရောင်၊ အလုဪဇကုသမ္မတအမေရိကာန်မေဿတာဗုသှ်ျ ကုဪအခိင်ဆုဪဂဗကုကွးဘာဂမႜိုင်ဝွံရောင်ဂှ် မတ်သာင်ဂွံပရိုင်ရ။
Posted by မတ်သာင် at 4:14 PM No comments:
ဂကောံညးဗြၜမန်ကၞိန်ဍုင်အမေရိကာန်ဝွံ ကုဪအရီုဗင်ဒက်ဂကောံညးဗြၜမန်ဍုင်အကြန်တဲု ဗျူလေၞာင်ဟွံဂတာပ် စိုပ်ကႜုင်သဘင်သှကႜှညးဗြၜမန်ကၞိန်ဍုင်အမေရိကာန်ပႜန်တဲု ဒးကောံကႜုင်ပႛဲဘာဗုဒ္ဓဘာသာမန်ဍုင်ဝှတ်ဝုင်ပႜန်ရ။ ပႛဲသဘင်သှကှႜ၀ွံ ညးတံ အာတ်အရီုဗင်နဲာမတ်သာင်၊ နဲာဝိသုဒ္ဓ၊ နဲာပါန်ထ၀် တႝဟ်နသပကမ္မသျှေန်တဲု ညးပိတႜဂှ် ကုဪဏာအရီုဗင်ကီုရောင် ဂွံပရိုင်ရ။ ညးလျိုင်ကာသႝာံတၞိဝွံ အတိုင်သၞ၀်တေံ မဒ်ှရ။
Posted by မတ်သာင် at 3:31 PM No comments:
မတ်သာင်။ အကြန်၊ ဒှဇြေမ်ပါ ၂၅၊ ၂၀၀၇
အတိုင်လေၞင် သႝာံဝွံ သွက်သဂွံသ္ပသဘင်သှကှႜ အာဒတုံမံင်ဍုင်အကြန်တဲု ဂကောံဗော်ဒေသဂမႜိုင် ဇက်ဂေႜဲာစိုပ်အာဍုင်အကြန်တဲု ကေႜာန်ဗဒ်ှဏာ သဘင်သှကႜှဇေႝာ်ဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန်အလုံအမေရိကာန်ရောင် မတ်သာင်ဂွံပရိုင်ရ။ ဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန်ဝွံ ဒက်ပ္တန်လ၀် နကုဪဘုံသၞ၀်ဘုံလ္တူတဲု သဘင်သှကႜှဝွံ္ဘိုန်ရဒ်ှသဘင်သှကႜှဘုံလ္တူကီုလေ၀် ညးလုပ်ဂကောံဗော်ဘုံသၞ၀်ဂမႜိုင် ဟွံယှအ်စိုတ်ဓာတ်မွဲ ဇက်ဂေႜဲာတိုန်ညှညှသာသာမာန်ဂှ် ဒ်ှလက်သဏ်ခိုဟ်မွဲတဲု သွက်ဗော်က္လေင်ဍုင်မန်(အကြန်) သဂွံဇေႝာ်မောဝ်ရာင်ဆဲာဂ်ှလေ၀် ဒ်ှအထံက်အပင် ဗွဲမဂႜိုင်ဂႜင်ရ။ အဃောဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန် သှကႜှမံင် ပႛဲဘာမန်ဂှ် ဂကောံညးဗြၜမန်တံလေ၀် အာသှကႜှမံင် ပႛဲမွဲဇြပ်ဇႝူမလိင်လ၀်မွဲဒႝဲာတဲု ဘိုင်စန်ဒက်ကုဪဂကောံညးဗြၜမန်ဍုင်အကြန်ရောင် သဂွံတီကေတ်ရ။ နဲာမတ်သာင်လေ၀် ပႛဲလအိတ်ကောံဓရီုဂှ် နကုဪအစှဇန်သၞတ်ဝှတ်ဝုင်တံ ဆက်အာသဘင်ကောံဓရီုသၞတ်အကြန်တံရ။ သၞတ်မန်ဍုင်အကြန်တံတုပ်စိုတ်သွက်သဂွံဒက်ပ္တန်ဂကောံသၞတ်မန်မွဲ ပႛဲဍုင်အကြန်ရ။ ဂကောံဂှ်္ဘိုန်ရဒှ်္ဘါကီုလေ၀် ညးတံဗ္စာအာ သွက်သဂွံရပ်စပ်အာသေႝာဝ်မွဲရ။ သၞတ်မန်နူဝှတ်ဝုင်တံလေ၀် ယ၀်သရဲအကြန်တံချပ်ဗ္စာရပ်စပ်စကာအာ စေ၀်ပေႝာန်မွဲဓ၀်မ္ဂး သွက်သဂွံဇက်သေႝာဝ်တၞိဂှ် တုပ်စိုတ်ရ။
Posted by မတ်သာင် at 2:31 PM No comments:
Ethnic leader: Don't be deceived by the Burmese regime’s stratagem
Motsaing: Dec. 26, 2007
The division of Shan State into different autonomous regions is the outcome of divide-and- rule policy adopted by the successive military regimes in Burma, and ethnic groups should not fall into the trap of the deceitful plan of the junta, saidaPa-O leader recently.
The National Convention organized by the Burmese military regime had designated self administered regions to5different ethnic groups in Burma, such as Kokang , Pa-O, Palaung , Danu (who are located in Shan State) and the Naga in Sagaing Division, Northwest Burma.
“The question is why are these special territories given to mostly groups from Shan State? The Shan State is quite diverse with lots of different ethnic groups and dividing Shan State into different parts will be easy for the Burmese military regime to create tensions and problems among the ethnic groups”, said Hkun Okker , General Secretary of National Democratic Front (NDP) and Chairman of Pa-O People's Liberation Organization (PPLO), during the Youth and Federalism Workshop attended by over 20 ethnic youth from inside and outside Burma, organized by Nationalities Youth Forum from 12-21 December, in Thai-Burma border.
He continued, “Those who get self administered areas should not be pleased as it is onlyaphony name, not real autonomous rights. Moreover, each of those areas will include3military authorities from the ruling junta. And that will create tensions between the groups who get autonomy and who do not. That is onlyastrategy of the military junta”.
“Not only in Shan State but also in the other states, the strategy of divide and rule of the Burmese military regime has been extremely successful. Lots of ethnic armed groups are split and sometimes even turn their gun points to each other”, said one of the Kachin youth.
"We needacommon leadership that will take full responsibility for all ethnic groups and not only for individual groups to combat the regime that understands the weak points of ethnic groups and therefore knows how to keep themselves in power," said Hkun Okker.
“We must unite and trust each other. We, the ethnic groups are brothers and sisters and we must fight together in order to wipe out the military junta and buildagenuine federalism”, said one of the Arakanese participants youth.
“Not only should we unite but we should also have the ability to win. Now we are still weak in every aspect, whether physical power or intelligence. We will have to be better than our enemy. Youth are future leaders and ethnic youth have both values: value of youth and the value of being ethnics. Therefore, ethnic youth must work doubly harder and must take more responsibility than other people in struggling for change in Burma,” Hkun Okker concluded at the end of the workshop.
http://www.shanland .org/politics/ 2007/ethnic- leader-dont- be-deceived- by-the-burmese- regime2019s- stratagem...
Posted by မတ်သာင် at 2:22 PM No comments:
ရန်တၞံကုဪမအံက်စုတိအာတဲု နဲာတေန်ဥူ ပကုသဪ
မတ်သာင်။ ၀ှတ်ဝုင်၊ ဒှဇြေမ်ပါ ၂၂၊ ၂၀၀၇
ရန်တၞံကုဪမအံက်မႝုံယၞုနဲာအံင်ဟုန် မကလိဂွံအာယုက် (၈၄)သႝာံ မစုတိကလိလောန်စၜအာဘ၀ပြလိုက်တေံ ပေင်အာ(၇)တၝဲတဲု နဲာတေန်ဥူ ပကုသဪုကုဪဒါန် ပႛဲဘာဗုဒ္ဓဘာသာမန်ရောင် မတ်သာင်ဂွံပရိုင်ရ။ ပႛဲကုသုဪ၀ွံ နဲာအိန္ဒသာရ တွံဓရ်စရိုဟ်ဏာဍ်ာတဲု နဲာတေန်ဥူကီု၊ ပရိသာတ်မှာဇန်မပြာပ်တိုန်စိုပ်ဂမႜိုင်ကီု ဇိုန်ပိုန်ပြင်ဏာမဒါန်ကုသုဪ ကုနဲာအံင်ဟုင်အိုတ်ရ။ နဲာတေန်ဥူဝွံ ဒ်ှမန်နူဇာတိကွန်ခယျး(ပႛဲ)တဲု ဒ်ှဗႜဲာဇမေႝာ်မယျုဪလ္ဂူတပ်တးမွဲ ကရောံနဲာပါန်ထ၀်၊ နဲာမန်ဇေတ်တံရ။
Posted by မတ်သာင် at 2:42 AM No comments:
မတ်သာင်။ ၀ှတ်ဝုင်၊ ဒှဇြေမ်ပါ ၂၃၊ ၂၀၀၇
တၝဲဝွံ ဒ်ှတၝဲဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန်(၀ှတ်ဝုင်)သှကႜှမရနုက်ကုဪ္ဘါတၝဲတဲု ဗွဲဒဒ်ှသ္ကုတ်တတိယ သွက်သဂွံမင်မွဲထိင်ဒက်အာသြန်လျိုင်ကေုာံအဆက်ဂကောံသြန်ဂမႜိုင်ကီု၊ သွက်သဂွံဖန်ဖက်ကာယေန်သႝာင်မန်ဂမႜိုင်ကီု ခါန်ကႝက်ပ္တိုန်ဂကောံမင်မွဲအဲာကၞဲာယေန်သႝာင်မန်မွဲဂကောံရောင်မတ်သာင် ဂွံပရိုင်ရ။ ပႛဲဂကောံမင်မွဲယေန်သႝာင်မန်ဝွံ နူဂကောံဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန်ဂှ် သ္ကိုပ်ယေန်သႝာင်မွဲတႜ၊ နူကမ္မတှမင်မွဲယေန်သႝာင်မန်ဂှ် မွဲတႜ၊ နူဂကောံသင်္ဘါဇကု၊ နူဂကောံညးဗြၜ္ဘါတႜ၊ နူဂကောံသၞတ်္ဘါတႜလုပ်လၞိဟ်ရ။
ပႛဲသဘင်သှကႜှဝွံဟေင် ပံက်ထောံကမ္မသျှေန်ရဲုမဲာမွဲတဲု ပႛဲကမ္မသျှေန်ဂှ် ဂကောံသင်ပိဇကု (၀ိသုဒ္ဓ၊ ရာဝိက၊ ကုမာရ)၊ ဂကောံညးဗြၜ္ဘါတႜ (မိပ္ကၜရတ်၊ မိယှနန်)၊ ဂကောံသၞတ်္ဘါတႜ (စန္ဒောမန်၊ အံင်ဟံင်) လုပ်လၞိဟ်ရ။ ဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန်တြေံဂှ် က္လေင်အပ်ကုဪတာလျိုင်ကုကမ္မသျှေန်မဲာတဲု ဒုင်ရိုဟ်ပလီုထောံရ။ ပေဲါရဲုစ်ှမဲာဝွံ စနူ(၃)နာဍှတဲု စုဪကုဪစိုပ်(၆း၁၅)နာဍှသ၀်တၝဲ လံလအာတဲု ကလိဂွံညးတာလျိုင် (၂၀)တႜရ။ ညးတာလျိုင်ဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန် (ကႝာင်ဝှတ်ဝုင်)ဂမႜိုင်ဂှ် နဲာသက်လောန်၊ နဲာပါန်ထ၀်၊ နဲာမဂ္ဂါမန်၊ နဲာကောန်ယက္ခ)၊ နဲာသ၀်အဲာ၊ နဲာလွှ၊ နဲာတိဿ၊ နဲာမန်ဇေတ်၊ နဲာမန်ဇျဲာ၊ နဲာမန်ချုဪ၊ နဲာပညာမန်၊ နဲာသိုက်မန်၊ နဲာဆာန်နဲာ၊ နဲာထ၀်အံင်၊ နဲာဟံင်ဝင်၊ နဲာသြန်ဇ၀်၊ နဲာစိင်ထ၀်၊ နဲာရတ်ပိုင်ဒေ၊ နဲာအသောက၊ မိစၜဗုမန် မဒ်ှရ။ ပႛဲလအိတ်မရဲုစ်ှညးတာလျိုင်တဲုဂှ် ကမ္မသျှေန်မဲာ ဇိုန်ဏှင်အပ်ပြာပ်ကုဪတာလျိုင် ပႛဲလဒေါဝ်ပရိသာတ်ဂမႜိုင်ရ။
ဇူဒီုကေႜံသဘင်သှကႜှမွဲချိုန်ခဏတဲုဆက်အာပႜန် နဒဒ်ှသ္ကုတ်စတုတ္ထ ညးမကလိဂွံလ၀်မဲာဂမႜိုင်ဂှ် ဒက်ပ္တန်ထောံဗော် (2008)ဓ၀ဲါဂ်ှရ။ ညးတာလျိုင်ဂမႜိုင်ဂှ် နဲာသက်လောန် (ဥက္ကဌ)၊ နဲာပါန်ထ၀် (ဒုဥက္ကဌ)၊ နဲာမဂ္ဂါမန် (ညးရင်တႜုင်ဖဪု)၊ နဲာကောန်ယက္ခ (ဒုညးရင်တႜုင်ဖုဪ)၊ နဲာသ၀်အဲာ (သ္ကိုပ်ကာဘဏ္ဍာ)၊ နဲာလွှ (ဒုသ္ကိုပ်ကာဘဏ္ဍာ)၊ နဲာတိဿ (သ္ကိုပ်ကာဗုဒ္ဓဘာသာ)၊ နဲာမန်ဇေတ် (ဒုသ္ကိုပ်ကာဗုဒ္ဓဘာသာ)၊ နဲာမန်ဇျဲာ (သ္ကိုပ်ကာပိုန်ဂြပ်)၊ နဲာမန်ချုဪ (ဒုသ္ကိုပ်ကာပိုန်ဂြပ်)၊ နဲာပညာမန် (သ္ကိုပ်ကာပရိုင်)၊ နဲာသိုက်မန် (ဒုသ္ကိုပ်ကာပရိုင်)၊ နဲာဆာန်နဲာ (သ္ကိုပ်ကာပညာ)၊ နဲာထ၀်အံင် (ဒုသ္ကိုပ်ကာပညာ)၊ နဲာဟံင်ဝင် (သ္ကိုပ်ကာရီုဗင်)၊ နဲာသြန်ဇ၀် (ဒုသ္ကိုပ်ကာရီုဗင်)၊ နဲာစိင်ထ၀် (သ္ကိုပ်ကာစၞှစၞတ်)၊ နဲာရတ်ပိုင်ဒေ (ဒုသ္ကိုပ်ကာစၞှစၞတ်)၊ နဲာအသောက (သ္ကိုပ်ယေန်သႝာင်)၊ မိစၜဗုမန် (ဒုသ္ကိုပ်ယေန်သႝာင်) မဒ်ှရ။ နူညးတာလျိုင်ဂမႜိုင်ဝွံ ညးတံဆက်ရဲုစ်ှလ၀် ညးတာလျိုင်ဘုံလ္တူ (၅)တႜပႜန်ရောင် သဂွံတီကေတ်ရ။ ညးဘုံလ္တူ(၅)တႜဂှ် နဲာပညာမန် ကြက်ဍိုက်အာကႛိုပ်ပႜန်ရောင်ဂ်ှလေ၀် သဂွံတီကေတ်ရ။
Posted by မတ်သာင် at 1:13 AM No comments:
ဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန် (၀ှတ်ဝုင်) ပသဘင်သှကႜှဇေႝာ် (၁၄)၀ါ
တၝဲဝွံ ဒ်ှတၝဲမႝုံကုဪမၝုဪဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန်(၀ှတ်ဝုင်) ပသဘင်သှကႜှ မရနုက်ကုဪ (၁၄)၀ါတဲု ဂကူမန်ဂမႜိုင် တိုန်စိုပ်ဂြုဂြုဂြီုဂြီုအိုတ်ရောင် မတ်သာင်ဂွံပရိုင်ရ။ သဘင်သှကႜှဝွံ ဒ်ှသဘင်သှကႜှကိစ္စဇေႝာ်မွဲတဲု သဘင်သှကႜှမရဲုစ်ှညးလျိုင်ဗော်ဂမႜိုင်လေ၀် ဒ်ှရ။ ပေႝာဝ်ဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန်မႝုံပႛဲအမေရိကာန်ဂမႜိုင်ဂှ် ဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန် (၀ှတ်ဝုင်)ဂှ် ဒ်ှဂကောံမႝုံကုဪဇြဟတ်မဇေႝာ်အိုတ်တဲု သ္ဂုတ်သွာတ်မစှေ်ကႜုင်နူသဘင်သှကႜှဝွံ ညးဂမႜိုင် ဒးပကာဂႜိုင်ရ။
သဘင်သှကႜှဇေႝာ်ဝွံ ကေႜာန်ဗဒှ်္ဘါတၝဲ မွဲတၝဲမ္ဂး္ဘါသ္ကုတ် ကေႜာန်ဗဒ်ှအာရောင်မဒ်ှတဲု ပႛဲတၝဲပထမ၀ွံ တဲုဒ်ှအ္ဘာါသ္ကုတ်ရ။ ပႛဲသ္ကုတ်ပထမဂှ် ဒ်ှသ္ကုတ်ကုဪဏာလာဘ်ပ္တိုန်ဏာဂုဏ်စရဲာကုကွးဘာမန်မစောန်သကာ ပႛဲဘာအမေရိကာန်ဂမႜိုင်တဲု ကွးဘာဂမႜိုင် (၁၃)တႜ ဂွံဏာလာဘ်မွဲဟာန်ကေုာံတဆိပ်ကြာရောင်ဂွံတီကေတ်ရ။
ပႛဲသ္ကုတ်ဒုတိယဂှ် ပဏာသဘင်သှကႜှတဲု ဌာနဂမႜိုင် ဒုင်ဏာအစှရေင်ဂမႜိုင်ရ။ တဲုဂှ် ညးမတိုန်စိုပ်သဘင်သှကႜှဂမႜိုင် ပႜုပ်ဂလာန်သၞာန်သၞုက်ကေင်ကာကမ္မတှဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန်(ကႝာင်ဝှတ်ဝုင်)ရ။ သၞာန်ဂမႜိုင်ဂှ် ညးလျိုင်ဌာနဂမႜိုင်ကီု၊ လဆောဝ် သဘာပတိဂမႜိုင်ကီု ဟီုသ်ှလၜထ႟းဏာကုပရိသာတ်တံရ။
ဆေင်စပ်ကုဪသေႝာဝ်ဥပဒေဗော်တဲုလေ၀် သၝှဂႜိပ်အာ (၃)ပိုဒ်ဇေႝာ်တဲု ပဏာဒတန် ဇဖန်ဂ်ှရ။ ပႛဲအစှဇန်ကုဪကသပ်ဂှ် ညးဂမႜိုင်ကုဪတၜကသပ်ဂႜိုင်ကုဪဗီုတဲု ညးမဒ်ှသဘာပတိသဘင်သှကႜှ နဲာမတ်သာင်လေ၀် ဆေင်စပ်ကုဪသေႝာဝ်ဥပဒေဗော်ကီု၊ ဆေင်စပ်ကုဪကွှစက်ဘာကီု၊ ဆေင်စပ်ကုဪပရေင်ပိုန်ဂြပ်ဗော်ကီု ကုဪဏာကသပ် (၃)တင်ကီုရ။
Posted by မတ်သာင် at 9:52 PM No comments:
မတ်သာင်။ ၀ှတ်ဝုင် ၁၂၊ ၁၉၊ ၂၀၀၇
တႜဂုဏ်အ္စာညာဏ၀ံသ (ဇာတိကွာန်ကံဗိန်၊ လၞုဟ်ဒဒ်ှကောန်ဍုင်ယူကေ)ဂှ် နဒဒ်ှညးမတိုန်စိုပ်ကောံဓရီုသင်ကႝိပ် ပႛဲဍုင်လေဿန်ဂျလိသ် ကၛစိုပ်ကႜုင်ကၞိန်ဍုင်အမေရိကာန်ဝွံတဲု တၝဲဝွံ ပယာံနူဂယး ၀၂း ၀၀နာဍှဂှ် စိုပ်ကႜုင်ဘာမန်ဍုင်ဝှတ်ဝုင်ဝွံရောင် မတ်သာင်ဂွံပရိုင်ရ။
ပႛဲတၝဲဝွံဟေင် နဲာမန်သာင် (ဌာနပရေင်ပညာ)၊ တႜဂုဏ်အ္စာဝိသုဒ္ဓ ကေုာံ နဲာမတ်သာင် ပံင်သၞဟ်တဲု ရင်တႜုင်ဏာတႜဂုဏ်အ္စာညာဏ၀ံသတိုက်ထ႟းပျးအဗြဟာမ်လေင်ခိုန်တဲု သောင်ထ႟းကုဪပရူဝင်သမ္မတအဗြဟာမ်လေင်ခိုန်ရ။ အဗြဟာမ်လေင်ခိုန်ဝွံ ကာလညးဒ်ှကောန်႞ာ် ကေင်မံင်ကႜုင် ပႛဲတွုဪရးအေန်ဒိယျာဏာဝွံတဲု တိုက်ထ႟းပျးညးမွဲ နွံပြာကတ်မံင် ပႛဲဍုင်ဝှတ်ဝုင်ဝွံရ။
နူကုဪဘ၀မံင်ကႜုင်သၝိတဲာ ဂွာန်တိုန်စိုပ်အာသၝိဗုသမ္မတမာန်ကီု၊ ညံင်ကၞိန်ဍုင်ဟဂွံဒကး ထိင်ဒက်မင်မွဲကႜုင်မာန်ကီု၊ ဒ်ှညးမမင်မွဲအခေါင်ညးဝါတ်ဂါတ်ဂမႜိုင်ကီု သမ္မတအဗြဟာမ်လေင်ခိုန်ဝွံ ဒယ်ှတမ်ည၀်မံင်အလုံလိုက်မွဲရ။
" ရံင်စမ် ... ကပေါတ်အမေရိကာန်တံကေႜာန်ဗၝ၊ ကႜာတေံဏံ ဗီုပိုယ်ကီု ရပ်မဲုရပ်မြ ရပ်တောဝ်ချုဪကႜးကႜးဏး၊ ဟိုတ်နူဇဲညးတံခိုဟ် ဟိုတ်နူညးတံညှသာသၞဟ်သၞန်တဲု ဍုင်ညးတံ ဇေႝာ်မောဝ်ရာင်ဆဲာကႜုင် လၞုဟ် ပိုယ်ကညာင်ကော်ဟွံမိင်ရ။" သ်ာဝွံ တႜဂုဏ်အ္စာညာဏ၀ံသ မြော်ပ္တိတ်အဃောဂေတ်ဗုဪမံင်ရ။
တႜဂုဏ်အ္စညာဏ၀ံသ၀ွံ ဒ်ှညးမကလိဂွံလ၀်တဆိပ် MA နူတက္ကသုဪသာသနာလ္ဂုင်တဲု ပႛဲသႝာံခရေတ်၂၀၀၁ တေံဂှ် ကၛအာပ္တန်သာသႝာ ပႛဲဍုင်ယူကေရ။ ညးဝွံ တန်တၜမံင် ပႛဲဘာတိသရဏသေန်တာတဲု ပႛဲဘာဂှ် တဲကႜာတေံ မန်ပိဗၞာပိ တန်တၜမံင်ကီုလေ၀် ပႛဲကာလလၞုဟ်ဝွံ ဟိုတ်နူကျာ်ဇေႝာ်မံင်မႜအ္စာက၀ိန္ဒပ၀်အာ နကုဪယဲကေန်သာကီု၊ ဟိုတ်နူအ္စာနန္ဒပါလ ဒးတိုန်မံင်ဘာသွက်တဆိပ်ကြာပါရဂူကီု ပႛဲဘာဂှ် သှေ်မံင်မန်ညးမွဲဇကုဓ၀်ရောင်ညးလၜထ႟းရ။
တႜဂုဏ်အ္စာညာဏ၀ံသ၀ွံ ပႛဲဂကောံသင်ဍုင်မန်ဗၞာယူကေဂှ် ကေတ်လ၀်တာလျိုင်သ္ကိုပ်ဘဏ္ဍာတဲု ပေႝာဝ်သင်မလုပ်ဆုဪဂဗ၀န်ဇေႝာ်ယူကေ ဂ၀်ဒန်ဗရော(န်)ဂှ် ပါလုပ်လၞိဟ်မွဲဇကုကီုရောင် သဂွံတီကေတ်ရ။
Posted by မတ်သာင် at 3:38 AM No comments:
History of Syriam (5)
၎င်းသက္ကရာဇ်။ ပြည်မြို့ရဲလှေ ၁၀စင်းကိုလည်း ဖွဲ့တော်မူ၍၊ ရဲလှေတိုက်ရခိုင်စောင့်မြို့ရွာလူလှေထိန်း၊ တက်ခပ်ပေးတော်မူသည်။ ၀န်လည်း ဗလကျော်စွာကို ခန့်တော်မူသည်။ ငဖြိုးငယ်ကို စာရေးခန့်တော်မူသည်၊ ရဲလှေသား ၁၀ ခမည်းတော်ဘွဲ့ရင်း ၉ စင်းကို ခန့်တော်မူသည်။ ၉ စင်းအပါမြို့ရွာများကိုလည်း၊ ခမည်းတော်လက်ထက်က ထမ်းရင်းအတိုင်း ထပ်မှတ်ပေးအပ်တော်မူသည်။ ပြည်မြို့ ၁၀ စင်းအပါ လှေစီးတစင်းလျှင် ၄၀ ပေါင်းလှေသား ၅၀၀၊ ၎င်းလှေတော်သားနှင့် တစ်ချက်တည်း ၀န်တို့က နှိုးဆော်၍၊ အရေးရှိလျှင် တောင်ကို ကူထွတ်အထိ ကင်းစောင့်နေရသည်၊ ရဲလှေအုပ်စုကို၊ ၀န်က စီရင်ရသည်၊ သံ၊ ပျင်၊ ပွဲရက်၊ ရေနံ၊ အုံးဆံကို ပြည်မြို့က ပေးရသည်၊ ပြည်ဝန်မှာ တောင်းရသည်။ ထေးလူလုပ်လူမှာ၊ ၎င်းသားတို့နှင့် ကြပ်မ၍ လုပ်ရသည်။ ၎င်းရွာများမှာ ၀န်းစားအမြို့လျှင်၊ ပါယ် ၁၀၀ စီ ရေးစား ၅ စီပါယ်၊ ပေါင်းစားမြေပေးရသည်၊ နောက်ဟံသာဝတီသံလျှင်မြို့များမှာလည်း၊ မြို့စောင့်၊ မြို့နေ၊ မြို့ဝန်၊ စစ်ကဲ၊ နာခံ၊ စာရေးကြီးခန့်ထားတော်မူသည်ကာလ၊ ဟံသာဝတီက သိမ်းခေါ်တော်မူရာပါသည့် လူအစို့သားတို့ကို၊ မြို့ဝန်တွင် ဖြည့်ပေးသနားတော်မူသည်။ မြို့ဝန်မင်းနှင့်အပါ ဗလကွန်သ္မိံအစု ရွှေပန်းပန်စို့သင်း ၅ စို့၊ မြင်း ၄ စို့၊ သေနတ် ၄ စို့၊ အမြောက် ၄စို့။ သူရဲ ၁၂ အပ်၊ အာမခံသူရဲ ၅ တပ်၊ တက်ခတ်စို့နှင့် အသုံးတော် လိမ်းတော်ဆီဆက် လိမ်းတော်နနွင်းဆက်၊ ကနူတံဆက် ၃ ရပ်လှိုင်းသားတို့ပြင်၊ အခွန် ၁၂ ရပ်မှာ၊ ရွှေခွန်၊ မတ်စေ့ခွန်၊ စမခွန်၊ ရမထာကြိမ်ထားကြိမ်ခွန်၊ သစ္စေးခွန်၊ နီပါးခွန်၊ ရန်းခွန်၊ စပါးခွန်း၊ ငရုပ်ခွန်။ ဆားခွန်၊ ငပိခွန်တို့နှင့်၊ ကရင် ၅ ရပ်သားမှစ၍၊ ဟံသာဝတီမြို့ရွားများတွင် ရှိနေသည့်လူတို့ကို၊ မင်းမှုမင်းခင်း၊ အခွန်စီရင်ဘွယ်၊ တရားစကားရာဇ၀င်မှစ၍၊ အလုံးစုံမျိုးကို၊ မြို့ဝန်စစ်ကဲ၊ နာခံမှတ်သားပြီးလျှင်၊ အခွန်တော်ကို တိုက်တော်မှာ သွင်းထားရသည်။ ခွဲခန့်ရသည့် အခွန်တော်စာရင်းချုပ်စာရင်းကျယ်ကိုလည်း စာရေးကြီးတို့ကို၊ အခွန်ဝန်စာရေးတို့က ရုံးတော်တွင် စာရင်းပေးသည်၊ သံလျှင်မြို့မှ၊ သဘောင်္ဆိုက်ရောက်လျှင်လည်း၊ ဟံသာဝတီတွင် ရှိသည့် အခွန်ဝန်ကို ခေါ်၍၊ သံလျှင်တွင် အကောက်ဝန်အရာနှင့် ကောက်ယူရသည်။ မြို့ဝန်မင်းကို၊ တနှင့်သုံးကြိမ် ရှေ့ကတပ်နှင့် ခင်းကျင်း၍ လိုက်ရသည်။ ပွဲတော်မှာ သတင်းက္ဈတ်ပွဲတော်၎င်း၊ ဘုရားပွဲတော်ထက်၊ ၎င်းသင်ဃာတို့ညောင်ရေသွန်းသည့် ပွဲတော်သုံးရပ်ကို ဆင်သည်၊ မြင်းသည်။ ရွှေပန်းပန်ပုလဲကွန်သ္မိံအမြောက်သေနတ်သူရဲ၊ လက်နက်စစ်ဝတ်တန်ဆာလက်စွဲကြိယာအစုံနှင့် မြို့ကပေးရသည်။ ရွှေဒကုန်ဘုရားဝတ္ထုကံမြေကား၊ ရာဇာဓိရာဇ်သ္မိံထော၊ ခင်ထောင်ဗိုဗျညားတော်အမည်ခံမင်းမိန်းမ၊ ဟံသာဝတီတွင်၊ သက္ကရာဇ် ၈၂၅ခု၊ မင်းပြုသည့်ကာလ၊ ထိုမင်းသ္မီးသည် အလှူကောင်းမှု၌၊ သဒ္ဓါစိတ်ကြီးသည်ဖြစ်၍၊ ဒကုန်ဘုရားရှင်ကို လုပ်ပြင်မည်။ ဒကုန်ဘုရားသို့ရောက်သည်တွင်၊ ဘုရားသိမ်တော်နှင်ံ တံတိုင်းကို လုပ်ပြင်တော်မူသည်။ ရွှေိကုယ်လေးစက်၍ ထီးတော်ုသည်၊ ဘိနပ်တော်ရောက်၊ ရွှေပုစွန်ခွန်မွန်း မန်တော်မူသည်၊ ဘုရားရှင်တွင် နေသည့်မြို့ရွာများကိုလည်း၊ ကျေး ၅၀၀၀ အဘိုးပြု၍ လှူသည်။ ဘုရား ၃မျက်နှာ၊ အရန်စောင့်လူ၎ တပ်ငယ်သားငါးရာတလခွါအကြီး ၄၊ စာရေး၂၊ စစ်ကဲ၁၊ တိုပြင် ရွှေလုပ်သွေးသောက်ကြီး ၁၊ သစ္စေးသွေးသောက်ကြီး ၁၊ ပရံသွေးသောက်ကြီး ၁၊ ရွှေစာရေး ၁၊ မြေတိုင်း ၁၊ သင်ပုတ်တော်တင် ၁၄၊ ဆီမီးထွန်း ၂၇။ တပြက်စောင့်လှဲလူ ၅၊ တိုက်စောင့်လူ ၁၀။ စမြောင်လူ ၄၊ တံခါးစောင့် ၈၊ ပန်းဘဲ ၄ထိုးလူပေါင်း ၁၀၀၆၊ မွန်ပတ် ၄ဆိုင်း၊ ကုလားစည် ၄၊ ထီးဖြူရွှေသပိတ် ၄၊ ရွှေပုစွန်ခွန် ၄၊ ပစ္စယံ ၄၊ တတိုင်း ၇ထပ်တည်လုပ်ထပ်လောင်းလှူတော်မူပြန်သည်။ဘုရားရှင်စတ္ထုကံမြေလှူတော်မူသည်။ နယ်မြေမှာ၊ အရှေ့ကို လားသော် ကျိုက်ကနက်ဘုရား။ တောင်ကို လားသော် ဓနုက်ဘုရား။ အနောက်ကို လားသော် ပြောင်ပျာဘုရား။ မြောက်ကို လားသော် မိုးရိပ်မိုးတော်ဘုရားဟူ၍သတ်မှတ်လှူတော်မူသည်။ သက္ကရာဇ် ၈၃၂ ခုတွင် မင်းမိန်းမဗျညားတော အနိစ္စရောက်သည်နောက် ဓမ္မစေတီလက်ထက်တွင်၊ ဗျညားတောလှူရင်းမြေနယ်ကြယ်သည်ဖြစ်၍၊ ချုန့်တော်မူပြန်သည်။ ဘုရားရှင်ဝတ္ထုကံမြေမှာ အရှေ့မြောက်ထောင့်ကို လားသော် သစ်သင်ကန်တောင်ထိ။ အရှေ့ကို လားသော် ငမိုးရိပ်ချောင်းထိ၊ အရှေ့တောင်ကို ငမိုးရိပ်ဝပန်းအလွဲချောင်းထိ။ တောင်ကို လားသော် ထုန်းဘိုဆိပ်၊ ဒကုန်မြတ်ဒလမြေနှင့်ကျောခိုင်း။ အနောက်တောင်ကို လားသော်။ ကန်ကြီးကင်း။ အနောက်ကိုလားသော်ကျေးမြင်တိုင်ကင်း။ အင်းဝပေါက်ချောင်းထိ။ အနောက်မြောက်ကို လေားသော် ကော်ဘီချောင်းဝ။ မြောက်ကို လားသော်၊ ငသံထင်ရွာကရုံကလောချောင်းထိ။ ချုန့်၍ သတ်မှတ်တော်မူပြန်သည်အတွက် မြေဘိုး။ ဓမ္မစေတီကိုယ်လေးနှင့်၊ ရှင်မိဖုရားကိုယ်လေးကို ရွှေနှိုင်းချင်းစက်ပြီးလျှင်။ ရွှေပုစွန်ခွန်ခပ်၍ လွှမ်းတော်မူသည်။ ခေါင်းလောင်းကြီးအ၀င်္ဂစောက် ၁၂တောင်။ ကြေးချိန်တသိန်းရှစ်သောင်းကိုလည်း သွမ်းလုပ်၍ လှူတော်မူပြန်သည်။ မော်ဘီမြို့နယ် ၈ရပ်ကား၊ အရှေ့ကို လားသော် ဖောင်းနင်းချောင်းထိ၊ အရှေ့တောင်ကို လားသော် ဖာလာချောင်းဝ။ တောင်ကို လားသော်၊ လဲကူးကျံချောင်းထိ၊ ရွှေဒကုန်မြေနှင့်ကျောခိုင်း။ အနောက်တောင်ကို လားသော် လဲကူးကျံချောင်းဝ။ အနောက်ကို လားသော် မြစ်မချောင်းရိုးထိ။ အနောက်မြောက်ကို လားသော်။ မြောင်းတကာချောင်းဝထိ။ မြောက်ကို လားသော်၊ ဗညားလဖွေချောင်း။ အရှေ့မြောက်ကို မဟူရာချောင်း။ သုံးခွရေဝေဆိုက်ဖောင်းနင်းနယ် ၈ရပ်ကား။ အရှေ့ကို လားသော် မဟူရာချောင်းဖျား။ ကျောက်ထရံကြက်လည်ဆစ်၊ အရှေ့ကို လားသော်၊ ဖောင်းနင်းချောင်း။ ကောက်ကောက်စင်းစင်း။ အရှေ့ကို ကြက်လှဘုရားချောင်း။ ရေဝေးတောင်ကို ဘားလားတံတားချောင်းထိ။ အနောက်တောင်ကို အဇိုင်ကုန်းကျောက်ရေတွင်းထိ၊ အနောက်ကို ၀ါးတပင်တိုင်တောင်ရိုးထိ။ အနောက်မြောက်ကို ကျောက်တမောကျောက်တမ်း။ မြောက်ကို ရိုးမထိ။
Posted by မတ်သာင် at 11:13 PM No comments:
History of Syriam (4)
ဘထွေးတော်သာလွန်မင်းတရားကြီးလည်း၊ သက္ကရာဇ် ၉၉၄ ခုတွင် အင်းဝက ဟံသာဝတီသို့ ချီလာသည်။ မချီတော်မူမှီ၊ ရှမ်းပြည်ယွန်းပြည်က ချီလာတော်မူ၍ ၊ အင်းဝသို့ ရောက်တော်မူကြောင်းကို မင်းရဲဒိပ္ပကြားလျှင်၊ ရခိုင်သို့ ထွက်ပြေးမည်ကြံသည်တွင်၊ ၀င်းသား၊ ဒိုင်းသားတို့က မင်းရဲဒိပ္ပကို အကြည့်ထားလေသည်။ ဘထွေးတော်သာလွန်မင်းတရားကြီး ဟံသာဝတီသို့ ရောက်လျှင်၊ မင်းရဲဒိပ္ပကို ရ၍ ထပ်လောင်း၍ အကြည့်ထားတော်မူသည်တွင်၊ မင်းရဲဒိပ္ပလည်း၊ အနိစ္စရောက်လေသည်။
နောက်သာလွန်မင်းတရားကြီးလည်း၊ ဟံသာဝတီတွင် ရှိသည့် မြန်မာတလိုင်းရှမ်းယွန်း၊ ဒါးဝယ်၊ ယိုးဒယားတို့ကို၊ အကုန်အစင်သိမ်းရုံးတော်မူ၍၊ ၉၉၆ ခုတွင်၊ အင်းဝနေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်တော်မူသည်။ ရောက်၍၊ ရွှေထီးရွှေနန်း တက်သိမ်းတော်မူပြီးလျှင်၊ ဟံသာဝတီက ပါသည့်မြန်မာ၊ ရှမ်းအစုစုသာ ရှမ်းပြည်၊ ယွန်းပြည် ၁၂ ပြင်သားတို့ကို၊ ယွန်းစုကောင်ဟံလမိုင်းစီထီးလက်လှုပ်မှာ ဖြည့်တော်မူသည်။ ယွန်းစုကောင်ဟံတို့ကို၊ တိမ်ညင်းနွားသတ်ကျပင်းနွယ်တမယ်စလင်း၊ ကန္နီ၊ မဓုံ၊ မုံရွာ၊ အမြင်ပရိမ္မ၊ မင်းကျောင်း၊ မူသာ၊ ယူတော်မူလက်ဆောင်ခံ၊ ကြည်ရွာ၊ ဘုရားဌွက်၊ ရွာများတွင် ချထားတော်မူသည်။ စောလှမြို့နယ်တွင် စုထားသည်။ ဟံသာဝတီက သိမ်းတော်မူသည်မြန်မာတလိုင်း၊ ရှမ်း၊ ယွန်း၊ ကုလားတို့ကို၊ အစို့အငန်းဖွဲ့တော်မူသည်မှာ၊ ဟံသာဝတီသျှိ၊ တောအမြို့စု၊ မုတ္တမဗျညားတလ၊ ၀င်ရောစားဒေ၀က မာဆွေသားမျိုးသားစစ်တောင်း ဗျညားအိမ်ဒဆွေသားမျိုးသား၊ လယာဗညားသီဟဆွေသားမျိုးသား၊ ရွှေပန်းပန်ကွန်သ္မိံစုတို့ကို ဗညားဓမ္မရာဇာနှင့်လူ ၅၀ သိမ်းတော်မူရာကပါ ကဲ့သည်။ ရွှေပန်းပန်ကွန်သ္မိံစု၊ က္ဈန်တော်ရင်းဒေ၀ကမ္မာကို သွေးသောက်ကြီးခန့်၍၊ ဗညာအိန္ဒဆွေမျိုးသားလူ ၅၀ကို ရွှေပန်းပန်ကွန်သ္မိံစုဘွဲ့တော်မူသည်။၊ ဗညားဖြတ်စကို၊ သွေးသောက်ကြီးခန့်၍ ဗညားသီဟဓမ္မတ္တဆွေသားမျိုးသားလူ ၅၀ကို ရွှေပန်းပန်ကွန်သ္မိံစုဘွဲ့တော်မူသည်။ ပညားကွန်တတို့ကို၊ သွေးသောက်ကြီးခန့်၍၊ ဗညားဒလဆွေသားစမျိုးသားလူ ၅၀ကို ရွှေပန်းပန်ကွန်သ္မိံစုဘွဲ့တော်မူသည်။ ဗညားရာဇာကို သွေးသောက်ကြီးခန့်၍၊ သ္မိံထောဆွေသားမျိုးသားလူ ၅၀ကို ရွှေပန်းပန်ကွန်သ္မိံစုဘွဲ့တော်မူသည်။ လုပ်နေမြေပေးချသနားတော်မူသည်။ ဒေ၀ကမ္မာသွေးသောက်ရွှေပန်းပန်ကွန်သ္မိံစုတို့ကို၊ နေမြေ၊ စစ်ကိုင်း၊ ဇင်းကြံချောက်တောင်ဘက်ကို၊ ကျေးပုဏ္ဏား၊ အရှေ့ကို ဦးယျာဉ်မြေ၊ အနောက်ကို၊ လမ်းမ၊ မြောက်ကို ခြောက်လကောင်းပညားစက္ကသွေးသောက် ရွှေပန်းပန်ကွန်သ္မိံစုနေမြေ၊ အင်းဝမြို့တောင်အရှေ့ကို ဘကိုးချောင်း၊ တောင်ကို သဘင်သည်ရပ်၊ မြောက်ကို ဇင်းမယ်မြင်၊ အနောက်မှိုင်ပွန်ချောင်း၊ ဗညားအိန္ဒသွေးသောက် ရွှေပန်းပန်ကွန်သ္မိံစု၊ ဗညားဖြစ်စသွေးသောက် ရွှေပန်းပန်သ္မိံစုနှစ်၊ သွေးသောက်ကို တဘက်ဆွဲ အရှေ့ကို ကုလားချောင်း၊ တောင်ကို ရန်နှစ်ကျော်အင်းတိုင်၊ အနောက်ကို မိုးဒူးတိုင်၊ မြောက်ကိုမြစ်၊ ၎င်းအတွင်း တာဝန်း ၄၀၀ ဗညားအိန္ဒသွေးသောက်နေမြေ၊ ပုကံရွှေကျောင်းစာ၊ သ၀တ်မြေတုတို့ဆိပ်ရွာ၊ အရှေ့ကို ကင်းပါခဲ၊ တောင်ကို ၉သန်း၊ အနောက်ကို သူငယ်တော်၊ မြောက်ဆင်တဲ၊ အတွင်းတာဝန်း ၅၀၀၊ နေမြေချတော်မူသည်။ ဟံသာဝတီအရှေ့ဘက်၊ ရွှေပန်းပန်ကွန်သ္မိံစုငါး သွေးသောက်သားတို့ကို လုပ်မြေချပေးတော်မူသည်။ ရွှေပုထိုးဘုရားရှင်ဝတ်မြေ၊ တောင်ပြုန်းငယ်မြို့နယ်အ၀င်၊ ဇေယဘော်တိုင်နက်၊ ဥလောအင်လုပ်မြေပါယ် ၆၀။ အရှေ့ကို ဇင်းမယ်၊ ရွှေပန်းပန် မြောက်ကို ပြည်ပါ၊ ရွှေပန်းပန် တောင်ကို နုပ်စုမြောင်းမတော်၊ အနောက်ကို ရွှေပန်းပန်မြေနယ်လေးရပ်အတွင်း၊ ငါးသွေးသောက်လုပ်မြေပါယ် ၆၀ ၎င်းဇင်းမယ်ရွှေပန်းပန်အင်ယည် စန္ဒသူသွေးသောက်၊ ၎င်းပြည်ပါဘယအဂ္ဂသွေးသောက်ရွှေပန်းပန်၊ ၎င်းစက္ကယော်တသွေးသောက်ရွှေပန်းပန်၊ စက္ကနန္ဒသွေးသောက်ရွှေပန်းပန်၊ သီရိဇေသွေးသောက်ရွှေပန်းပန်၊ ညောင်ရန်းပါသုံးသွေးသောက်တို့ကို ပေးချတော်မူသည်။ ဥလောအင်းအတွင်းရွှေပတိုးဘုရားရှင်ဝတ်မြေပါ ၄၀၊ အရှေ့ကို ယိုးဒယားလယ်အသိနုပ်စုပေါင်း၊ အနောက်ကို စပိုင်သိလယ်အသီနုပ်မြေကို သူရဲမြေကို သူရဲမြေ၊ မြေလေးရပ်အတွင်းအစုစု ရွှေပန်းပန် ၁၀သားတို့ကို ပေးချသနားတော်မူသည်။
Posted by မတ်သာင် at 12:46 AM No comments:
History of Syriam (3)
မရှိလျှင်၊ သက္ကရာဇ် ၉၇၀ပြည့်တွင် သားတော်အနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားရွှေထီး ရွှေနန်းကို စိုးအုပ်တော်မူသည်။ ပြည်မြို့မှာလည်း၊ မင်းကြီးနောင်ကို၊ ရန်နိုင်မှုလုပ်ကြံ၍၊ မင်းပြုတော်မူလျှင်၊ သက္ကရာဇ် ၉၇၄ခုတွင်၊ အနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားကြီးဘုရား၊ အလုံးအရင်းများနှင့်၊ ပြည်မြို့သို့ ချီတော်မူသည်။ ရောက်လျှင်၊ ရခိုင်မြို့က၊ ဘရင်ဂျီကုလား၊ ငဇင်္ဂါသည်၊ သိမ်ဂုတ္တရကုမ်း၊ ရွှေဆံတော်ဘုရားရှင်စီစေတီကောင်းမှု၊ ခေါင်းလောင်းကြီးကို ချ၍၊ အမြောက်သွမ်းမည်ကြံသည်တွင်၊ ဘုရားရှင်တံခိုးတော်ကြောင့်၊ ပန်အလွဲတွင်၊ သဘောင်္နှင့်တကွ နစ်မွန်း၍ အမြောက်မသွမ်းရရှိသည်တွင်၊ ငဇကာင်္သည် အနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားကြီး ပြည်မြို့ကို အလိုပြည့်သည်နှစ်၊ လက်နက်ကြိယာ၊ ဆေးခဲးရန်း၊ လက်ဆောင်ပဏ္ဏာ၊ က္ဈန်တော်ကို သံလျှင်မြို့တွင်၊ မြို့ရာသရေချပ်ရာ၊ သနားတော်မူပါ၊ အသနားခံ၍၊ မြေသရေတချပ်ရာ သနားတော်မူသည်တွင်၊ ငဇင်္ဂါသည် သရေကို၊ နန်းငင်၍၊ အရှေ့အနောက်တောင်မြောက် သရေကြိုးတဆန့်စီ တိုင်းထွာပြီးလျှင် မြို့တည်လေသည်။ ဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီးလည်း ပြည်မြို့ကို အလိုတော်ပြည့်လျှင် တောင်ငူဘထွေးတော်နတ်ရှင်နောင်ကို စည်းစိမ်းပျက်သနားတော်မူမြဲသနားတော်မူသည်။ နန်းတော်မှန်ကင်းကို ချ၍၊ ရွှေထီးရွှေနန်း၊ ရာဇပလ္လင် ဦးကင်းထီးဖြူနှင့်တကွ မင်းပြုစေသည်။ ၎င်းသားတော်မင်းရဲကျော်ထင်ခံ၊ မင်းရဲကျော်စွာသားတော် ၂ပါးကိုလည်း၊ အင်းဝနေပြည်တော်သို့ သိမ်းခေါ်ခဲ့၍၊ ရမည်းသင်း၊ ယင်းတော်သို့ ရောက်မှ၊ တူတော်အနောက်က္ဈန် မခံလိုတော့ပြီ၊ ငဇင်္ဂါအစီအရင်ကို ခံတော့မည်၊ ရာဇသံမှာ စာနှင့် ကြက်ရုမ်းပင်စားတို့ကို၊ သံလျှင်မြို့ ငဇင်္ဂါထံသို့ စေသည်တွင်၊ ကြက်ရုမ်းပင်စားတို့နှင့်၊ ငဇင်္ဂါကို ဗိုလ်လုံးတပ်လုံးအများ တောင်ငူသို့ ရောက်လာ၍၊ ဘ၀ရှင်မင်းတရားက ထားခဲ့သည်၊ ၀န်ရှင်တော်ဗိုလ်မှူးတပ်မှူး၊ လှံကိုင်အစောင့်အနေတို့က၊ ဆီးကြိုတိုက်လှန်လျှင်၊ ၀န်ရှင်တော် ဆင်ဦးပေါ်တွင် လက်နက်သင့်၍ ဆုမ်းသည်နှင့်၊ ရဲမက်လက်နက်ကိုင်တို့ မခံမရပ်နှိုင်၊ ရွှေဘ၀ါးတော်အောက် အင်းဝသို့ ထွက်ပြေး၍ တောင်ငူမြို့ကို ကုလားတို့ ရလေသည်။ နတ်ရှင်မယ်တော်ကိုလည်း၊ ပန်းယမြို့တွင်၊ စကျောအိမ်ဖြူဆောက်၍ ထားတော်မူသည်။ များမကြာ၊ ရှမ်းပြည်၊ မိုးကောင်းမိုးညှင်း၊ မညိမ်မ၀ပ်ကြောင်းကို ကြား၍၊ ချီတော်မူပြန်သည်။ အလိုတော်ပြည့်၍၊ နေပြည်တော်သို့ ရောက်တော်မူလျှင်၊ သက္ကရာဇ် ၉၀၁ခု၊ သံလျှင်သို့ ချီတော်မူသည်၊ သံလျှင်မြို့ကို အောင်တော်မူလျှင်၊ ဘထွေးတော်ကို စစ်ဆေးမေးမြန်း၍၊ သာသနာတော်ဖြက်လူဆိုးလူသွမ်းတို့နှင့် ပေါင်းဘက်သသူ ဖြစ်သည်။ ဘထွေးတော် ဖြစ်သော်လည်း၊ မထားသင့် အမိန့်တော်ရှိ၍၊ ရင်ကိုဖွင့်စေသည်။ ငဇင်္ဂါကိုလည်း သာသန်ာတော်ကို ဖြက်၍ ပြစ်သည်ဆို၍၊ သံလျှင်မြို့ရုံးရှေ့တွင်၊ သံတံကျင်တင်သည်၊ စီရင်ကွပ်ဖြက်တော်မူပြီးလျှင်၊ သံလျှင်မြို့ကိုလည်း သဘောင်္ဆိပ်ဖြစ်၍၊ သဘောင်္အဆီးအကျိုင်းစောင့်၊ ကင်းရဲလှေ ၁၂ စင်းခန့်တော်မူသည်။ ၉၈၄ခုတွင် ဟံသာဝတီသို့ ချီတော်မူ၍၊ သက္ကမတဲနန်းတော်မှာ စံတော်မူသည်တွင်၊ ရခိုင်ဘုရင်က ငဇင်္ဂါကို ကူညီစိမ့်မည်၊ သဘောင်္ ၃စင်း၊ လက်နက်ကြိယာအများနှင့်၊ သံလျှင်ဆိပ်သို့ ရောက်ကြောင်းကို ကင်းစောင့်၊ ကင်းနေတို့ လျှောက်ထား၍ ကြားသိတော်မူလျှင်၊ ၀န်ရှင်တော်သီရိန္ဒယောတနှင့်၊ ရဲမက်လက်နက်ကိုင်အများခန့်ထား၍၊ စကားပြေပြောဆိုရမည်၊ ပြေလိုလျှင်ပြေစေ၊ မပြေလိုလျှင်လည်း သဘောင်္သုံးစင်းသားတို့ကို၊ မထွက်မသွားစေနှင့်၊ အမိန့်တော်ရှိ၍၊ ပြောဆိုရသည်တွင် ပြေလည်၍၊ သဘောင်္သုံးစင်းမှာပါသည့်လက်နက်ကြိယာများနှင့်တကွ သဘောင်္သားတို့ကို၊ သက္ကမတဲနန်းတော်သို့ ခေါ်၍၊ ရောက်လျှင်၊ စစ်ကြောမေးမြန်းပြီးမှ၊ သစ္စာတင်ပေး၍၊ ပသီးဗရင်ျါီသဘောင်္သုံးစင်းသားတို့ကို၊ ရွှေစက်တော်အောက် ထန်းရွက်စေသည်။ ငဇင်္ဂါဆွေသားမျိုးသားတို့ကိုလည်း၊ တပယင်းတွင်၊ ချထားတော်မူသည်၊ ငဇင်္ဂါလက်နက်ကိုင်လူစုတို့ကို၊ ကြောက်ရစ်ပနက်၊ ယင်းတော်မြို့ရွာများတွင်၊ လုပ်မြေနေမြေနှင့် ချထားတော်မူသည်။ ငဇင်္ဂါငယ်သားကုလားပသီတို့ကို မြေဒုမှာ ချထားတော်မူသည်။ အရပ်ရပ်အစို့အငန်းကိုလည်း သက္ကမတဲနန်းတော်တွင်၊ ဘွဲ့ဘက်တော်မူသည်။ မုတ္တမ ၃၅ မြို့၊ ၁၅ကင်း၊ လမ်းဆုံလမ်းဝ ဣန္ဒဂီရိဘုမ္မဂီရိ၊ ယိုးဒယားလင်းဇင်း၊ လမ်းဆုံးလမ်းဝ၊ အစောင့်အနေ ၁၅ကင်းတို့ကိုလည်း ဘွဲ့ဘက်ခန့်ထားတော်မူသည်။ ကမ္ဗောဇတိုင်း၊ ကြိုင်ရုမ်ကြိုင်သည်၊ မညိမ်က၀ပ်ရှိကြောင်းများကို ကြားတော်မူ၍၊ ညီတော်သတိုးဓမ္မရာဇာ၊ မင်းရဲကျော်စွာတို့ကို၊ ရှမ်းပြည်ယွန်းပြည်သို့ အလုံးအရင်းများနှင့် ချီသွားစေသည်၊ သားတော်မင်ဲးဒိပ္ပသည်၊ သက္ကမတဲနန်းတော်တွင်၊ ကိုယ်လုပ်တော်သီရိမဟာဒေ၀ီကို ယည်ပါး၍ သန္ဓေရှိသည်နှင့်၊ သက္ကမတဲနန်းတော်က ပြောင်း၍၊ အနောက်ဘက်မော်အရီတဲနန်းတော်မှာ၊ စံတော်မူသည်တွင်၊ သားတော်မင်းရဲဒိပ္ပလုပ်ကြံ၍၊ သက္ကရာဇ် ၉၉၀ပြည့်တွင်၊ နတ်ပြည်စံတော်မူသည်။ မင်းရဲဒိပ္ပက ဘထွေးတော်တို့ကို၊ သစ္စာတိုက်စေသည်တွင်၊ ဘထွေးတော်တို့က သစ္စာကို မခံ၊ ရှမ်းပြည်ယွန်းပြည်သို့ ချီသွား၍၊ ရှမ်းယွန်စစ်သည်ရဲမက်လက်နက်ကိုင်အများတို့ကို သိမ်းရုံးပြီးမှ၊ အင်းဝသို့ ချီလာ၍၊ ရောက်လျှင်၊ မင်းရဲဒိပ္ပထားသည့် ဗိုလ်မှူးတပ်မှူးတို့ကို စီရင်ကွပ်မြက်ပြီးမှ၊ သာလွန်မင်းတရားကြီး မင်းပြုသည်။
Posted by မတ်သာင် at 7:32 PM No comments:
မတ်သာင်။ ၀ှတ်ဝုင် ဒှဇြေမ်ပါ ၁၅၊ ၂၀၀၇
သွက်သဂွံပတိုန်ဂုဏ်စရဲာကွးဘာမန်သကေက်သကာပႛဲကၞိန်ဍုင်အမေရိကာန်တဲု ဂကောံညးဗြၜမန်ကၞိန်ဍုင်အမေရိကာန် ကေႜာန်ဏာပေဲါကောံဓရီုမွဲ ပႛဲဂႜံသှကႜှညးဗြၜရောင် မာတ်သာင်ဂွံပရိုင်ရ။ ပႛဲကောံဓရီုဝွံ ရဲုစ်ှလ၀်ကွးဘာမန်မသကေက်သကာ ဗႝတ်(၁၃)တႜတဲု ဇိုန်ဏှင်အပ်ပြာပ်ကုဪတဆိပ်ကြာ ဗွဲမချိုတ်ပႜိုတ်ဒးရးရောင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ မိပ္ကၜရတ် လၜထ႟းကုဪနဲာမတ်သာင်ရ။
Posted by မတ်သာင် at 6:56 PM No comments:
History of Syriam (2)
မုတ္တမမှာ ၀ါရိရုမင်းမရှိသည်နောက် စုံလင်မင်းပြုသည်။ ၎င်းနောက် စောအိုမင်းပြုသည်။ ၎င်းနောက် ဇောစိတ်မင်း။ ၎င်းနောက် ဇိတ်ပန်းမင်းပြုသည်။ ၎င်းနောက် ဗျညားရန္တမင်းပြုသည်။ ၎င်းနောက် အကံကောင်းမင်းပြုသည်။ ၎င်းနောက် ဗညားအဲလော။ ၎င်းနောက် ဗညားဦး မင်းပြုသည်။ ထိုမုတ္တမမြို့တွင်မင်းရှစ်ဆက်ပြုသည်အခိုက်။ ပဲကူးဟံသာမှာ နှစ်ဆယ်သုံးနှစ်နှင့်နှစ်လခြောက်ရက် မင်းဆက်ပြတ်၍နေသည်။
ဗညားဦးလက်ထက်တွင်မှ ခြောက်နျစ်စံပြီး၍။ မုတ္တမမြို့မင်းဆက်ကုန်သောကြောင့်။ သက္ကရာဇ် ၇၁၆ခုတွင်။ ဗျညားဦး ဟံသာပဲကူးသို့ လာ၍ မင်းပြုပြန်သည်။ ဗျညားမရှိနောက် ရာဇာဓိရာဇ် မင်းပြုသည်။ ၎င်းနောက် ဗျညားဓမ္မရာဇာမင်း၊ ၎င်းနောက် ဗျညားရန်ခိုက်မင်း၊ ၎င်းနောက် ဗျညားဘရှူး၊ ၎င်းနောက် ဗျညားကျမ်းတော၊ ၎င်းနောက် ဗျညားထော်၊ ၎င်းနောက် ဓမ္မစေတီမင်း၊ ၎င်းနောက် ဗျညားရန်မင်း၊ ၎င်းနောက် တကာရွပ္ပိမင်း၊ ၎င်းနောက် တပင်ရွှေထီးမင်းပြုသည်။ ၎င်းနောက် သ္မိံထောရာဇာ တတိယပရိစ္ဆေဒမင်းပေါင်း ၁၂ ဆက် မင်းပြုသည်အနက်။
သ္မိံထောရာဇာလက်ထက် ကေတုမတီတောင်ငူပြည်ကြီးက ဆင်ဖြူများရှင်မင်းတရားကြီးဘုရားသွေးသောက်တော် ၂၈ယောက်နှင့်တကွ။ စစ်သည်ဗိုလ်ပါအလုံးအရင်းများနှင့်ချီလာသည်။ ပန်းကျော်ချောင်းတွင် သ္မိံထောရာဇာကို တွေ့လျှင် တိုက်၍ အောင်မြင်တော်မူသည်။ ဟံသာပဲကူးသို့ ရောက်တော်မူမှ ဆင်ဖြူများရှင်မင်းတရားကြီးဘုရား ဟံသာပဲကူးအနောက် မြင်းသီလာကုမ်းအရပ်တွင် သက္ကရာဇ် ၉၂၇ခု နတ်တော်လဆန်း ၄ရက် ၅နေ့ မြို့ပြအိုးတံခါးမှစ၍။ ၁၂ဌာဏကို တချန်တခါတည်း တည်လုပ်တော်မူသည်။ သက္ကရာဇ် ၉၂၈ခုနှစ်မှ ပြီးသည်။ မြို့တံခါးပေါင်း ၂၀၊ တံဇောင်းပြအိုးပေါင်း ၁၀၀၉၊ လမ်းမတဆယ်၊ လမ်းငယ်အများရံလျှက် ရေမြောင်းသွယ်၍ တူးလုပ်စေသည်။ ကျုံးကား အတာ ၂၀၊ ဇောက်ကား အတောင် ၂၀၊ မြို့တံခါး ၅၀မှာလည်း လုပ်သည်။ မြို့ရွာအမည်းအတိုင်း သမုတ်တော်မူသည်။ တံခါးအမည်ကား။ အရှေ့မြောက်ထောင့် ပြည်တံခါး။ ၎င်းကသည် အင်းဝတံခါး။ ၎င်းကသည် တောင်ငူတံခါး။ ၎င်းကသည် စလင်းတံခါး။ ၎င်းကသည် ဒလတံခါး။ အရှေ့တောင်ထောင့် ဇင်းမယ်တံခါး။ ၎င်းကသည် အုံးပေါင်တံခါး။ ၎င်းကသည် မိုးညှင်းတံခါး။ ၎င်းကသည် မိုးကောင်းတံတား(တံခါး?)။ ၎င်းကသည် ဒါးဝယ်တံခါး။ အနောက်တောင်ထောင့် ကလေးတံခါး။ ၎င်းကသည် မိုးနဲတံခါး။ ၎င်းကသည် ညောင်ရွှေတံခါး။ ၎င်းကသည် သာရာဝတီတံခါး။ ၎င်းကသည် သိန်နီတံခါး။ အနောက်မြောက်ထောင့် ယိုးဒရားတံခါး။ ၎င်းကသည် တနသာင်္ရီတံခါး။ ၎င်းကသည် မုတ္တမတံခါး။ ၎င်းကသည် ပုကံတံခါး။ ၎င်းကသည် ပုသိမ်တံခါး။ တံခါးပေါင်း ၅၀ လုပ်ရသည်။ မြို့ရွာပြင် ကျန်သည့် ပခန်ကြီးမြို့သားတို့ကို မြို့ရိုးတလျှောက် ထမ်းပင်လမ်းဆုံလမ်းခွများကို အုံးပင်စိုက်ရသည်။
ဟံသာဝတီနယ်ရှစ်ရပ် သတ်မှတ်သည်ကား အရှေ့ကို ယွန်းစလင်းဝင်မြို့၊ အရှေ့တောင်ကို ဒီချောင်းဝတဘက် မုတ္တမမြေနှင့်ကျောခိုင်း၊ တောင်ကို ၀င်လေးချောင်းတဘက် သံလျှင်မြေနှင့်ကျောခိုင်း၊ အနောက်ကို ဘကိုးချောင်းတဘက်ကို လက်ထုံးပြု၍ ရွှေဒဂုံဘုရားရှင်မြေစပ်၊ အနောက်ကို ပအိုင်မြေထိ ကတ္တုတင်ချောင်းအနောက်မြောက်ထောင့်ကို အောက်မြေကုန်းသာရာဝတီနှင့်ကျောခိုင်း၊ မြောက်ကို ရဲနွဲ့ချောင်းထိ တောင်ငူမြေနှင့်ကျောခိုင်း၊ အရှေ့မြောက်ကို သံဆိတ်ကျောက်မှော်။
သည်နယ်ရှစ်ဆယ်သတ်မှတ်အတွင်းတွင်။ မြို့ရန် ၃၂မြို့အမည်ကား။ မင်းရဲလှမြို့၊ နဲရည္စညမြို့၊ ထန်းတောမြို့၊ တီတွတ်မြို့၊ ဇောင်းတွံမြို့၊ ကောလံယမြို့၊ တလနွံမြို့၊ ဘိုင်းတာမြို့၊ လဲပြောသလွန်မြို့၊ တုန်းခန်းရဲနွဲ့မြို့၊ ကြောက်မော်မြို့၊ ဒုစရာဇ်မြို့၊ စစ်တောင်းမြို့၊ ဘန်းမြို့၊ အဿမြို့၊ နည်ဆုမြို့၊ ယွန်းစလင်းမြို့၊ ၀င်ပြိုင်းမြို့၊ ဒင်းမဲမြို့၊ တကာရွတ်ပိမြို့၊ ကောခုမြို့၊ ဇရွဲအုံးမြို့၊ မော်လုံမြို့၊ လကွန်းဗျည်းမြို့၊ အခရိန်မြို့၊ ဖောင်းနင်းမြို့၊ မော်ဘီမြို့၊ စကုမြို့၊ လောကောမြို့၊ လိုင်မြို့ဟူ၍ ၃၂မြို့အမည်သမုတ်ခေါ်ဝေါ်သည်။
မင်းတရားကြီးနှင့်သစ္စာတော်သောက်ဘက်သွေးသောက်တော်ကြီးရင်ကား။ မကော်ရွာစားနန္ဒသူရိယခံခနို၊ ဂုဏ္ဏသီရိဇေရနော်ရထာခံ ပုသိန်မြို့စားငရဲဆွေ၊ ဇေယမဟာကြီးခံ မြောက်တောင်မင်းသရဇေရခံ ခဘုံစား။ မြေပဲစား။ ခတီး။ စလင်းစား။ ကျော်ထင်းဘွဲ့ခံငထွေးဖြူ။ တရကျော်ခံ ရွှေထိုင်၊ ငအောင်နိုင် အမည်မရခင် သေ။ ဇင်ရိုင်စားပေါ်မြို့ကြီးစား ငအုန်းကြွယ်။ ကွန်းဘုံစား ငထွေစစ်။ ကြောက်ရစ်စားငပေါက်သစ်။ စစ်တောင်းစားအသ၀တ်ဘွဲ့ခံ ငသံကြယ်။ ဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီးအမည်တော်ငရဲထွတ်။ ပျံချီကြီးခံငသိဒ္ဓတ်။ ကန္နီစားဇေယဘယခံငသူတော်။ ပခန်းစားသင်ခယာခံငသော်တ။ ၀ဲဓားရာဇသင်ချံခံငထွေးညို။ ကြက်သာရွာစားငဘယံ။ မုတ္တမစားသီရိဇေယကျော်ထင်ခံသုက္ခ၀တီစား၊ ငနှောင်း။ နော်ရထာကြီးခံငပြည်ဝ။ စစ်ကိုင်းစားသရေစည်သူခံပေါက်လှသက်ရှည်ကျော်ထင်ကြီးခံငစံသူ။ မင်းရဲသိန်ခသူခံပစ်ပနာစားငထွေးကြိုင်။ သွေးသောက်တော်ကြီး ၇အပေါင်း ၂၈တို့နှင့်။
အရပ်ရပ်မကျိုးနွံသမျှမြို့ရွာများကို သိမ်းရုံးလုပ်ကြံတော်မူ၏။ နေပြည်တော်ဟံသာဝတီမြို့ရောက်လျှင် အရပ်ရပ်အစို့အငန်းဖွဲ့တော်မူသည်။ သက္ကရာဇ် ၉၄၃ ခု တဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၆ရက် ၄နေ့၊ ဆင်ဖြူများရှင်မင်းတရားကြီးဘုရား နတ်ပြည်စံတော်မူသည်။ ၎င်းသက္ကရာဇ်တွင် သားတော်မဟာဥပရာဇာငါးဆူဒါယကာ ရွှေထီးရွှေနန်းကို စိုးအုပ်တော်မူသည်။ ၎င်းသားတော်ကြီးအကြီးကိုလည်း။ မဟာဥပရာဇာအမည်ကို သနားတော်မူသည်။ တောင်ငူမှာလည်း ကိုးသိမ်းသခင်ဘုရင်မင်းခေါင်မရှိနောက် သားတော်မင်းကျော်ထင်ရွှေန်စံမင်းကို တောင်ငူမြို့ကို သနားတော်မူသည်။ ၎င်းသားတော်နတ်ရှင်နောင်ကိုလည်း တောင်ငူမဟာဥပရာဇာကို သနားတော်မူသည်။
၉၄၉ခု ယိုးဒယားဗြနရာဇ်ချားနား၍။ သားတော်မဟာဥပရာဇာ သားတော်ပြည်ဘုရင် သတိုးဓမ္မရာဇာယောက်ဖတော်နတ်ရှင်နောက်တို့ကို ဆင်လုံးမြင်ရင်များနှင့်ချီ၍ လုပ်ကြံစေသည်။ အင်းတောင်အရပ်ရောက်လျှင်။ စစ်အင်္ဂါကျင်းပ၍နေသည်အခိုက်။ ယိုးဒယားဗြနရာဇ်က စိန်ပြောင်းနှင့်လွှတ်၏။ ဆင်ဦးကင်းပေါ်တွင် သားတော်ဥပရာဇာ အနိစ္စရောက်သည်။ မဟာဥပရာဇာမရှိနောက် အင်းဝမင်းရဲကျောင်စွာကို ဟံသာဝတီသို့ ခေါ်၍၊ မဟာဥပရာဇာကို သနားတော်မူသည်။
နောက်တလိုင်းအမတ်၊ လင်ဇင်းအမတ်တို့ကို မယုံမကြည်တော်မူ၍။ လူအများတထောင်ခန့် ကွပ်မြက်တော်မူသည်။ ကျန်သည့်တလိုင်းထွန်းလင်ဇင်းတို့လည်း။ ဇင်းမယ်၊ တောင်ငူ၊ ညောင်ရမ်း၊ ယိုးဒယားတို့သို့။ အသီးသီးပြေးဝင်သည်နှင့် တောင်ငူမြို့၊ ပြည်မြို့၊ လင်ဇင်း၊ မုတ္တမ ခမည်းတော်နိုင်ငံတော် မြို့ရွာများလည်း အသီသီးချားနားပုန်ကန်လေသည်နှင့်။ ဟံသာဝတီမြို့ကိုလည်း တောင်ငူရခိုင် ၂ မြို့ဝန်၏လုပ်ကြံသည်။ ငါးဆူဒါယကာသားတော်ပြည်ဘုရင် တောင်ငူသို့ဝင်၍ ခမည်းတော်ကို ချားနားလေသည်။ ဟံသာဝတီပြည်ကြီးလည်း များမကြာ ပျက်စီး၍ စွယ်တော်သပိတ်တော်မှစ၍ ငါးဆူဒါယကာကိုနှင့်တကွ။ တောင်ငူသို့ ချီရောက်ကြလေသည်။ တောင်ငူသို့ ရောက်လျှင် နတ်ရှင်နောင်မယ်တော်နှင့်။ နတ်ရှင်နောင်တို့ရေတဲနန်းတော်တွင် လုပ်ကြံ၍ ငါးဆူဒါယကာ အနိစ္စရောက်သည်။
သက္ကရာဇ် ၉၆၀ ပြည့်တွင် ညောင်ရန်းမြို့စား။ မင်ရဲနန္ဒမတ်သည် တောင်ငူဘထွေးတော်။ ဘထွေးတော်ခြားနား၍ အားမဲ့အားကိုးဆရာတော်ကို တိုင်ပင်၍ စောနာပူရမြို့ကို သက္ကရာဇ် ၉၆၅ခု တီထွဋ်ပြုစုတော်မူသည်။ ၉၆၄ခု သီပေါညောင်ရွှေမိုးနဲသိန္နီမြို့ရွာများကို လုပ်ကြံတော်မူ၍ အပြန်ရွှေသာလျောင်းဘုရားရှင်သို့ ရောက်တော်မူမှ နတ်ပြည်စံတော်မူသည်။
Posted by မတ်သာင် at 4:23 PM No comments:
To reflect and ... Act
This can be shown by countries like India and Egypt, that are more than 2000 years old and are poor.
Japan hasalimited territory, 80% mountainous, inadequate for agriculture and cattle raising, but it is the second world economy.
The country is like an immense floating factory, importing raw material from the whole world and exporting manufactured products.
Another example is New Zealand which does not plant coco but has the best chocolate of the world.
In its little territory, they raise animals and plant the soil during four months per year.
Not enough, they produce the dairy products of the best quality.
It isasmall country that transmits an image of security, order and labor, which made it the world's strong safe.
Executives from rich countries who communicate their counterparts in poor countries show that there is no significant intellectual difference.
Race or skin color are also not important: Immigrants labeled lazy in their own countries of origin are the productive powers in rich European countries.
What is the different then? The different is the attitude of the people, framed along the years by the education and culture.
On analyzing the behavior of the people in rich and developed countries, we find that the great majority follow the following principles in their lives:
1. Ethic, asabasic principle
In poor countries, only minority follow these basic principles in their daily life. We are not poor because we lack of natural resources or because nature was cruel to us. We are poor because we lack of attitude. We lack the will to imply with and teach these functional principles of rich and developed societies.
If you love your country, let these words spread among your community and Change, Act!
Posted by မတ်သာင် at 3:11 PM No comments:
The History of Syriam
တႝဟ်နသဂွံထိင်ဒက်မင်မွဲအခိုက်ကႝာသုတေသနတဲု မအရေ၀်မံႝုကုဪအဓိပ္ပါယ်ပရေံပရေံညံင်ရၜ “တလာင်၊ တလိုင်း” တံဂှ် အဲဆက်ရပ်စပ်အာအတိုင်မူလိက်တြေံဂ်ှရ။ ဒႝဲာမလိက် “တလာင်၊ တလိုင်း”ဂှ် စၞတ်သမ္တီလ၀်အတိုင်ဂကူမန်တံတီလ၀်ဂ်ှညိ။
ပႛဲဝင်ဍုင်သြေင်ဝွံလေ၀် ၀င်ဗၞာတံစောန်ပြံက်လုပ်မံင်တဲု အရာလုဪဒ်ှသၝု၊ အရာလုဪဒ်ှစောင်ဂှ် ကပ်ှရဲုကေတ်ရ။ လိက်ဝင်ဝွံ အ္စာဝင် J.S. Furnivall, I.C.S. ဗ်ှလ၀် ပႛဲကောံဓရီုဇေႝာ်လေၞင်သႝာံ က၀်လိက်လ္ဂုင် (တက္ကသဪုလ္ဂုင်) ပႛဲ ၁၉၁၅ သႝာံ၊ ဂိတုဂျာန်ညူဝါရှ ၂၉ တဲု က္လေင်ဓမံက်ထ႟းလ၀် ပႛဲဂျုဪနၜသုတေသနမန်ဗၞာ (Vol.IV.V Pt.I (1-11, Pt.II (49-57), Pt.III (129-139), Pt.IV (139-151) ရောင်သဂွံတီကေတ်တဲု သတ်ဒတ်အဲပ္တိုန်ထ႟းလ၀်ပႛဲဗႜံက်ဝွံ အဲကလိဂွံနူကုဪအ္စာထ၀်သောန် (အ္စာထွန်းသိန်း)ရ။ သွက်ရဲပမံင်သုတေသနဂမႜိုင်ဂှ် ဖျေံစိုတ်တဲု ရပ်စပ်အာနဒဒ်ှသတ်ဒတ်ဂမႜိုင်မာန်ရောင်ဂှ် ဘိက်လၞိင်ဏာရ။ ဒုင်စသိုင်ပ်ါပဲါဆဲာဇၜညာဏ်အိုတ်ညိအၜ။
The chronicle of Syriam whick I give here, together withatranslation andafew notes, was originally discovered by me inamonastery in Syriam. This copy was defective, but another copy almost complete was foundamong the palm leaf mss. In the Bernard Free Library. I have compared it with Phayre’s History, with the Buch des Ragawan translated into German from the Talaing by Professor Schmidt, and published by the University of Vienna, 1906, and also with the sketch of Talaing History given in Lloyde=’s Gazetteer of the Rangoon District, of which I know but one copy _ that in the District Library of the former District of Hanthawaddy. This book might well be re-printed by Government. It gives much information about the administration in the early days which can not elsewhere be obtained. For the earlier legends the Mun Yazawin, compiled by U Naw,aco-adjutor of Phayre in the preparation of his history, has been consulted, while some of the notes are taken from bazaar chronicles of Pegu and Toungoo and from thamaings and play books.
To the Hon U Bah Too, U Tun Nyein and Mr. Duroiselle I am indebted for assistance given both in the translation and notes, and in particular to four elders of Syriam whose names I have unfortunately mislaid.
It must be admitted that some of the matter is uninteresting . But several of the legends are worth reading and several points of detail regarding Burmese administration deserve permanent record. Perhaps the chief claim of the work to perusal is that it is the only translation into English of any local Burmese chronicle which has been published asawhole during recent years. It is believed that there are many similar chronicles, and if these were translated and collected before they are lost considerable light would probable be thrown on many obscure passages of Burmese history.
ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော၊ သုံးလုထွဋ်မြတ်စွာဘုရားသည်၊ ဗောဓိပလ္လင်ကို အောင်မြင်တော်မူ၍၊ ၇-၀ါမြောက်တော်မူသောအခါ၌၊ မယ်တော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသော မိနတ်သားအား၊ မွေးကျေးဇူးကိုဆပ်အံ့သောငှါ၊ တာဝတိင်္သာနတ်ပြည်၌၊ ၀ါတွင်းသုံးလပတ်လုံး တရားဟောတော်မူပြီးလျှင်၊ အနောက်မြောက်ထောင့်သို့မျက်နှာရှေးရှုကြွတော်မူသည်တွင်၊ ဟံသာကုမ်းအရှေ့သို့ရောက်သည်ကာလ၊ ဟင်္သာဖိုမ၊ ကောင်းကင်သို့ပြန်၍၊ အတောင်နှစ်ဘက်ရှက်လျှက်ပူဇော်သည်ကို၊ ဘုရားသခင် မြင်တော်မူ၍ ပြုံးတော်မူသည်။ စွယ်တော်ရောင် ထွန်းတောက်သည်ကို၊ အရှင်အာနန္ဒာမြင်၍၊ ဘုန်းတော်ကြီးသောတရားမင်းဘုရား၊ အဘယ်အကြောင်းကြောင့်၊ ပြုံးတော်မူသနည်းဟုလျှောက်ရာတွင်၊ ချစ်သားအာနန္ဒာ၊ ထိုဟင်္သာဖိုမပြန်ဝဲသောအရပ်၌ငါပရိနိဗ္ဗာန်ယူတော်မူသည်နောက်၊ အနှစ် ၁၃၆-နှစ်ရှိသောအခါ၊ ဟံသာပြည်ကြီးဖြစ်လတ္တံ့ဟူ၍ သုံးလုအထွဋ်ဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်။
ထိုသို့ဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်အတိုင်း။ ၁၃၆-နှစ်ရောက်လျှင်၊ တက္ဈန်းနေပြည်ကုလားတို့သည်၊ သဘောင်္-၇-စင်းနှင့် မြို့ရွာရှာမည်လာလတ်သည်တွင်။ ဟံသာကုမ်းအရပ်ကိုတွေ့၍၊ လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးလျှင်။ သင့်တင့်လျှောက်ပတ်သည်ကိုမြင်လျှင်။ အစွဲအမှတ်ဖြစ်စိမ့်သောငှာ။ လုံးပတ်ငါးထွားအလျားခုနစ်တောင်ရှိသောသံတိုင်စိုက်ထားခဲ့ပြီး၍။ ချင်းတို့အရှင်ရှိရာမြို့ရွာသို့ပြန်သွားလေသည်နှင့်။ တလိုင်းတို့လည်းဗျာဒိဟသိုက်စာရှိသည်အတိုင်း၊ ဟံသာကုမ်းသို့မြို့တည်မည်သွား၍ကြည့်လတ်သည်တွင်။ ကုလားတို့ကစိုက်မှတ်သောသံတိုင်ကို တွေ့မြင်လေသောကြောင့်တလိုင်းတို့သည်၊ ဥပါယ်တမည်အကြံနှင့်သံတိုင်ကိုနှုတ်၍ ရွှေလင်းပန်း၇ချပ်၊တစဉ်၉ခုမြှုပ်ထားပြီးလျှင် သံတိုင်ကိုစိုက်မြဲစိုက်လေသည်နှင့်ကုလားတို့လည်း၊ မြို့တည်မည်ဟူ၍သဘောင်္အများနှင့်လာသည်။ တလိုင်းတို့လည်းမြို့တည်မည်၊ ဟံသာကုမ်းအရပ်သို့လာရောက်ကြ၍။ ငါတည်ရသင့်သူတည်ရသင့်ညင်းဆိုရသည်တွင်။ ကုလားတို့ကငါတို့မှတ်သည့် သက်သေသံတိုင်ရှိပါလျှက်၊ အဘယ်ကြောင့်မင်းတို့မြို့တည်ရမည်လောဆို၏။ တလိုင်းတို့ကလည်းငါတို့သာတစဉ် ၉ ခု၊ ရွှေလင်ပန်း ၇ ချပ်နှင့်မှတ်ရင်းမှတ်ဦးဖြစ်သည်။ မင်းတို့မှတ်သည့်သံတိုင်မှာ ငါတို့နောက်မှမှတ်ထားသည်သံတိုင်သာဖြစ်သည်ဆိုသည်တွင်။ မည်သူလျှင်မှတ်ဦးဖြစ်မည်ကိုတူ၍ကြည့်ကြသော်။ သံတိုင်အောက်တွင်ရွှေလင်ပန်း ၇ ချပ်၊ တစဉ် ၉ ခုကိုတွေ့မြင်သောကြောင့်။ ကုလားတို့ကမညင်းမဆိုနိုင်၍၊ ချင်းတို့မြို့ရွာသို့ပြန်သွားလေသည်။
ဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်ပေးသည်အတိုင်း။ နှစ်သက္ကရာဇ်ရောက်၍တလိုင်းတို့ကမြို့တည်မည်ပြုရာတွင်။ ဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည့်မြို့ဖြစ်သောကြောင့်။ သိကြားမင်းကိုယ်တိုင်စောင်မစီရင်သည်။ သက္ကရာဇ် ၅၁၄ခု-တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၁ ရက် ၂လာနေ့ ဟံသာကုမ်းတွင်မြို့တည်ပြီးမှ။ပဲကူးဟံသာအမည်သမုတ်၍။ သမလ၊၀ိမလညီနောင်နှစ်ပါးတို့အားပေးအပ်တော်မူသည်။
နောင်တော်သမလမင်းပြုသည်။ နောင်တော်မရှိလျှင်ညီတော်ဝိမလမင်းပြုသည်။ ၀ိမလမရှိနောက်အသားမင်း ၃-မရှိနောက်အရိန္ဒ၊အရိန္ဒမင်း၎၊ ၎င်းနောက်မဟိင်္သာရာဇာမင်း၅၊ ၎င်းနောက် နဂနွောမင်း ၆၊၎င်းနောက်မိဂါဒိပ္ပမင်း ၇၊ ၎င်းနောက်ဂစ္ဆမိယမင်း ၈၊ ၎င်းနောက်မဏုလမင်း ၉၊ ၎င်းနောက်သတ္တရကန္နမင်း ၁၀၊၎င်းနောက်မနုရာဇာမင်း ၁၁၊မိဂါဒိပ္ပမင်း ၁၂၊ ၎င်းနောက်သိင်္ခလမန္ဒမင်း ၁၃၊၎င်းနောက်ဥပရာဇောမင်း ၁၄၊၎င်းနောက်ပုဏ္ဏာရိကမင်း ၁၅၊၎င်းနောက်တိဿမင်း ၁၆၊ ပဌမပရိစ္ဆေဒမင်းပေါင်း ၁၇ ဆက်ရှိသည်။နောက်ဟံသာပဲကူးမြို့ ၁၃ နှစ်တောဖြစ်လေသည်။
နှစ်ရှည်လများရှိမူဒုတိယပရိစ္ဆေဒပကအဘယကာမဏိအမတ်၊ ဟံသာဝတီမြို့ကိုပြုစုသည်နှင့်များမကြာအဘယမာမဏိလည်း။ ပုကံမင်ူကိုချားပုံကံ၍၊ဟံသာဝတီတွင်မင်းပြုသည်။ ၎င်းနောက်ကလျာမင်းပြုသည်၊၎င်းနောက်တရားပျားမင်းပြုသည်လက်ထက်တွင်။ မုတ္တမမှာဝါရိရုမင်းပြုသည်ကာလ၊ ပုကံမြို့ကဟံသာဝတီသို့ တရပျားကိုတိုက်မည်ဗိုလ်ပါအများချီလာ၍ တရပျားက ၀ါရိရိမင်းသို့လက်ဆောင်ပဏ္ဏာအများနှင့်စစ်ကူပါမည်အကြောင်းစေသည်တွင်။ ၀ါရိရုမင်းလည်း စစ်သည်ဗိုလ်ပါအများနှင့်ချီလာ၍ ဟံသာဝတီကကူညီတိုက်လေ၏။ ပုကံစစ်သည်တို့လည်းမရပ်မခံနိုင်ဆုတ်သွားလေသည်။
၀ါရိရုမင်းလည်း အမှုပြီး၍မုတ္တမသို့ ပြန်မည်တွင်။ တရပျားက၀ါရိရုမင်း ကျေးဇူးသည် က္ဈန်ုပ်တွင်ကြီးပေသည်။ ကျေးဇူးကိုဆပ်လိုသည်လင့်နှင့်ပါဆို၍ ရပ်ဆိုင်းနေသည်နှင့်စစ်သည်တို့လည်း အမှတ်မဲ့တောအုံလှည့်ပတ်နေသည်အခိုက်။ ၀ါရိရုမင်းတွင်လူနည်းကြောင်းကိုကြားသိ၍။ တရပျားကိုယ်နှင့်စစ်သည်ဗိုလ်ပါအများ မြို့တွင်းကတိုက်မည်ချီလာကြောင်းကို၊ ၀ါရိရုမင်းသိမြင်လျှင်။ ငါသည်သူ့ချမ်းသာကိုရှာပါလျှက် ငါ့ကိုအကျိုးနည်းအောင်ကျေးဇူးမဲ့ရန်မူလာသည်မှာ။ ဘုမ္မစိုး၊ ရုက္ခစိုး၊ အာကာသစိုး၊ ကမ္ဘာစောင့်နတ်မြတ်အပေါင်းမှတ်ပါကုံတိုင်ပြီးမှ။ ၀သုနြေ္ဒနတ်လည်းသက်သေခံပါဆို၍ ရွှေဖလားနှင့်ရေသွန်းပြီးလျှင်ဆင်ပေါ်သို့တက်၍ တပ်တွင်ရှိသည့်ရဲမက်စစ်သည်တို့ကို သိမ်းရုံးပြီးလျှင် စီးချင်းတိုက်လေ၏။ တိုက်ကြသည်ကာလ၀ါရိရုမင်းဆင်ခြေဘုန်းလှံရှည်ကိုင်တို့က တရပျားမင်းကိုထိုးမိသောကြောင့်။ ဆင်ပေါ်ကကျလေ၍ သေလေ၏။ ၀ါရိရုမင်းလည်းဟံသာဝတီကိုအောင်မြင်ပြီးလျှင်။ နေရင်းမုတ္တမမြို့သို့ပြန်သွားလေသည်နှင့် ဟံသာဝတီပဲကူးမြို့လည်း။ မုတ္တမကျေးဖြစ်လေ၏။
ဆက်ပႜန်၊ ဆက်ရန်၊ To be continued...
Posted by မတ်သာင် at 1:46 AM No comments:
မတ်သာင်။ ၀ှတ်ဝုင် ဒှဇြေမ်ပါ ၀၉၊ ၂၀၀၇
သွက်သဂွံသၝှဂႜိပ်သေႝာဝ်ဂကောံကီု၊ သွက်သဂွံလးအနာဂတ်ဂကောံကီု၊ သွက်သဂွံပလေ၀်ပလေတ်စသွက်ကောံဓရီုဇေႝာ် ဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန်ကီု ရန်တၞံတဲု ပႛဲတၝဲဝွံဟေင် နူ ၁၂း၀၀နာဍှ စိုပ် ၁၅း၀၀ နာဍှ ဂကောံသၞတ်မန်ကၞိန်ဍုင်အမေရိကာန်တံ ကောံဓရီုတၜ ပႛဲေၟာံခန်ကောံဓရီု၊ ဘာဗုဒ္ဓဘာသာမန်၊ ဍုင်ဝှတ်ဝုင်၊ တွုဪရးအေန်ဒှယျာဏာ၊ ကၞိန်ဍုင်အမေရိကာန်ရောင် မတ်သာင်ဂွံပရိုင်ရ။
ပႛဲကောံဓရီုဂှ် တႜဂုဏ်အ္စာဝိသုဒ္ဓကေုာံတႜဂုဏ်အ္စာရာဝိက(မတ်သာင်) ရင်တႜုင်ဏာနဒဒ်ှသြ၀ါဒါစရိယတဲု ဥက္ကဋ္ဌဂကောံနဲာစန္ဒ ပဏာသဘာပတိရ။ ပႛဲကောံဓရီုဝွံ ဖျေံဂွံသ္ဂုတ်သွာတ်မစပ်ကုဪသေႝာဝ်ဥပဒေ(၆)တင်တဲု တင်ရန်တၞံဂကောံကီု၊ ယၞုဂကောံကီု၊ တဆိပ်ဂကောံကီု၊ အလာံဂကောံကီု၊ ပိုဒ်ပ္ကင်ရင်ကီု၊ ဌာနဂအုပ်ဂကောံကီု တဲုဒ်ှအာအိုတ်ရ။ အာဂတနူဏံ တၞံတၝဲအဒိုတ် ဆက်သှကႜှအာတင်ဂႝင်မသှေ်မံင်ဂမႜိုင်ရောင် ဂွံပရိုင်ရ။
Posted by မတ်သာင် at 12:37 AM No comments:
မတ်ဒိပ်။ ၀ှတ်ဝုင် ဒှဇြေမ်ပါ ၈၊ ၂၀၀၇
တၝဲဝွံ နဲာမတ်ဒိပ်ဂွံအခေါင်သၞာန်သွဟ်မိစၜဗုမန်ကေုာံမိသ္ဇင်ထ၀်ရ။ မိစၜဗုမန်ဂှ် ဒ်ှသ္ကိုပ်ယေန်သႝာင်ပႛဲကမ္မတှတၝဲဂကူမန် ၆၁၀ါတဲု မိသ္ဇင်ထ၀်ဂှ် ဒ်ှကောန်ခဒေံညးရ။ မိစၜဗုမန်ဝွံ ဒ်ှညးဗပေင်ပါရမှသ္ကိုပ်ဗဪုသာင်ရတ် (ဗိုလ်မှုးဆဲာဍင်)တဲု ကောန်နူဂႜံသြိုဟ်ဂ်ှပန်၊ ကောန်လွှစဂှ် ပိနွံရ။ ကောန်ဂႜံသြိုဟ်ပန်ဂှ် မာံဆာန်ဍုင်မန် (စုတိ)၊ မိကှေ်ဆာန်၊ ဗညာသာင်ရတ်မန်၊ မိသ္ဇင်ထ၀်မဒ်ှတဲု ကောန်လွှစပိဂှ် မာံအံင်မြဟ်၊ မိထ၀်ရေင် ကေုာံ မိသိုက်နန်မဒ်ှရ။
ဟိုတ်နူဂျိုင်ကႜုင်အကြာပေဲါပႝာန်တဲု ညာတ်ကောန်ပႝာန်မ္ဂး က္တုဪဒ်ှဓရ်ကရုဏာလၞိုန်ညးဟီုရ။ ပရူဒဒ်ှကရေင်လုပ်ဗတိုက်ဗဟဪုဗော်ဍုင်မန်တၞိကီု၊ ပရူညးထံင်ပရိုင်ဗၞာတံကေတ်ပရိုင် ကႜာဟွံဂွံသီဗဟဪုဗော်ဍုင်မန်တၞိကီု၊ ပရူကရေင်ပန်နဲာပါန်ညောအ်တံကီု ညးလၜမံင်လၞိုန်ဟေင်။
မတ်ဒိပ်။ ။ ပႛဲကမ္မတှတၝဲဂကူမန်သႝာံဏံ ကေတ်လ၀်တာလျိုင်မုရော။
စၜ၊သ္ဇင်။ ။ ကေတ်လ၀်တာလျိုင်သ္ကိုပ်ယေန်သႝာင်။
မတ်ဒိပ်။ ။ တေၞင်တေၞင်တၞဟ်တၞဟ် သဂွံစှပျးကုဪဂကူမန်တံ သႝာံဏံ မုရန်တၞံလ၀်နွံရော။
စၜ၊သ္ဇင်။ ။ ပဲါနူကုဪလှေ်ကွဲာဂှ် ဆိင်လ၀်ဆတ်စုတ် ပႜဇာတ်မန်ခေတ်တြေံမွဲ ... အဲဆိင်လ၀် ဇာတ်မိစၜဗု၊ ဆဂး ... ဇာတ်စာမ္မဒေ၀ှလေ၀် ဒ်ှမာန်။
မတ်ဒိပ်။ ။ အတိုင်ရန်တၞံလ၀်ဂှ် ပလေ၀်ပလေတ်စ စိုပ်မံင်တရၜတၞာဂလိုင်ရဟာ။
စၜ၊သ္ဇင်။ ။ လၞုဟ်္ဘိုတ်က၀က် ဟီုစဂွံကီုရ။
မတ်ဒိပ်။ ။ စပ်ကုဪတာလျိုင်တဲု ခိုဟ်ကုဪပရေံ္ဘါ ဗီုလုဪဒးဆုဪဂဗမံင်ကီုရော။
စၜ၊သ္ဇင်။ ။ ရန်တၞံကုဪသဂွံမင်မွဲအခိုက်ကႝာဂကူဇကုရလေ၀် ကေတ်လ၀်တာလျိုင်ဏံ၊ ခိုဟ်ကုဪပရေံဂှ် ဟီုထောံညးမွဲက၀က်က၀က်ပႜန်တှေ်တဲုရ၊ ကေႜာန်ကမေႜာန်ညးဂလိုင်တှေ် ဓရ်အေင်ဒုင်မွဲ ကိစ္စဇေႝာ်မံင်တဲု ယ၀်သအေင်ဒုင်အာမာန်တှေ် ခိုဟ်ကီု ပရေံကီု ဍေံဒ်ှအာဇြဟတ်ဇကုဖအိုတ်တဲု အံင်ဇႝးလေဲာသွာဏောင်ဟွံသေင်ဟာ။
မတ်ဒိပ်။ ။ မုမိက်သဂွံလၜစကုဪဂကူမန်တံရော။
စၜ၊သ္ဇင်။ ။ ဂကူမန်ကုဪမန် ရီုဗင်မင်မွဲညးသ္ကံညိ၊ ဆက်ကေတ်အာတာလျိုင်ဂကူ ညှညှသာသာအိုတ်ညိ။
Posted by မတ်သာင် at 7:49 PM No comments:
Some Place-names in Monland (Lower Burma): Pegu (ပဲခူး) = Paikhu
In the Glass Palace Chronicle and U Kala's Burmese History, this town is frequently referred to as (ဥဿာပဲခူး) Ussa Paikhu _ the classical and native names being put together. (ပဲခူး) Paikhu is the spelling used by the Burmese writers. It is, however, written (ဗဂေါ) Bago in Mediaeval Mon which word first occurs in (မုစလိန္ဒ) Mucalinda Inscription set up by Mon King Dhammaceti, and its meaning is "beautiful". Later, it is spelt in many different ways, such as
(a) ဗဂေါ = Bago
(b) ဗဂေါဝ် = Bagow
(c) ပဂိုဝ်, ပဂဪု = Paguiv
(d) ပဂ၀် = Pagaw
(e) ဘဂေါအ်, ဘဂေါ = Bhago.
(a), (b), (c) and (d) have the same meaning and the change in spelling is philologically possible, but as regards the last name (ဘဂေါအ်, ဘဂေါ) Bhago', the change from (၀်) 'w' into (အ်) 'a' is very uncommon in Mon language. Moreover, it hasadifferent meaning altogether, (ဘ) Bha = to cheat or cheating; (ဂေါအ်, ဂေါ) go' = to obtain. Hence it isatown obtained by cheating.
The last name gave rise toalegend found in many of the Mon and Burmese historical writings as follows: _
Once uponatime, Pegu was under the sea. As time passed,ashoal appeared in that place. A sailing boat which came from India for trading with "the eastern lands" became stranded there. Thereupon (ငဒူလာ) Na Du La and (ငဘာပါ) Na Bhapa who were captains of the boat foretold that in time to come that place would become at fertile island and therefore they buried in the earth nine brass trays as evidence of their claim to the island. Later on, two Burmese named (ငကြောင်) Na Gron and (ငကျား) Na Kya discovered the place and wishing to claim that they were the first discoverers, they buried nine basket-fuls of green-grams (ပဲနောက်) underneath those nine brass trays. Then the two Mons called (ငအောက်ပိ) Na Ok Pi and (ငအောက်ဆံ) Na Ok Cham came upon the scene and as they wanted to have the p;ace, they buried nine iron hooks below the green-grams and the brass tryas. Many years afterwards the descendants of those men found the account of the place in the respective records left by their ancestors and so they came in search of the place and found itafertile and pleasant island. A dispute arose among the claiments to the island and therefore they dug up the place and found the nine hooks all beneath the green-grams and brass trays, with the result that the island was given to the Mons. As it was obtained by cheating, it was known as (ဘဂေါအ်, ဘဂေါ်) Bhago'.
Some Burmese writers, however, think that the name (ပဲခူး) Paikhu has come from (ဥပါယ်ခိုး) Upay Khui. (ဥပါယ်) Upay is corrupted from (Pali) Upaya wich meansatrick and (ခိုး) Khui in Burmese means " to steal". So it isatwon stolen by trick. But I do not think that the Burmese word (ခိုး) Khui would be used inaMon place-name. I am, therefore, of the opinion that in view of the very strong evidence found in the inscription of (မုစလိန္ဒ) Mucalinda Pagoda, (ဗဂေါ) Bago is the original name of Pegu, meaning "atown of beauty". Like Rangoon, Pegu is an ancient town in Ramannadesa. It has two classical names (1) (ဟံသာဝတှ) Hamsawati and (2) (ဥဿာလ) Ussala. These classical names are frequently used in both Mon and Burmese literary and historical works. However, the name "Hamsawati" is more comly used by the people. In the Mediaeval Mon inscription set up by King Dhammmaceti near the (မုစလိန္ဒ) Mucalinda Pagoda in Pegu, it is referred to as Hamsawati the meaning of which is "the city of (Hamsa) swans". The legend for this name is as follows: _ Hundreds of years ago, two swan, make and female perched (one upon another) onasmall shoal as big only as the palm ofahuman hand, and this later became the fertile island of Pegu. As regards (ဥဿာလ) Ussala, it is first mentioned in the (ပရိမထှးလှိုင်ရှင်) Parimma Thihuinrhan Inscription, set up by King Kyansitta in the year 1107 A.D. Some Burmese and Pali scholars believe that (ဥဿာလ) Ussala is corrupte4d from Orrisa, the name ofaprovince in ancient India. I am, however, inclined to think that (ဥဿာလ) Ussala isaseparate name by itself having its own approapriate meaning. For if the word Orrissa were to be corrupted into (ဥဿာလ) Usssala, (သြ) O has to be changed into (ဥ) U, (ရိ) ri dropped and (လ) la added. Although the changing, dropping and adding of letters in this manner cannot be said to be impossible, it is to be regarded as improbable. Moreover, (ဥဿာလ) Ussala which is shortened later into Ussa has its won meaning. It isacombination of two Pali words, (ဥ) U and (သာလ) Sala. (ဥ) U means mounting, going up or increasing in height and (သာလ) Sala essence or wealth and the city of (ဥဿာလ) Ussala means therefore, "the city of mounting wealth." Although that city at the present is an inland town, formerly it wasasea port of great prosperity.
By Prof. E Maung M.A.
Posted by မတ်သာင် at 1:58 PM No comments:
မတ်ဒိပ်။ ၀ှတ်ဝုင်၊ ဒှဇြေမ်ပါ ၃၊ ၂၀၀၇
တၝဲဝွံ အဃောဂကောံဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန်(ဗကမ)ကောံဓရီုမံင်ဂှ် ညးဗြၜအမေရိကာန်မွဲ စိုပ်ကႜုင်ကရောံနဲာကောန်ယက္ခတဲု သၞာန်သ်ှဏာပရူဂကူမန်ကေုာံလညာတ်ဗုဒ္ဓဘာသာရ။ နဲာမတ်ဒိပ်ကုဪနဲာရတ်ရတ် ဒုင်ကၞဲုတက်ကျာကုဪညးရ။ ယၞုညးဂှ် ပိုယ်ကုဪလ၀် မိဟံင်ပြာ်တဲု အတိုင်ဂ်ှဟေင် ရပ်စပ်အာပႛဲသၞာန်သွဟ်ဝွံရ။ ဗွဲကိုပ်ကႜာ ဆက်မိတ်ကေုာံရင်သ္ကံတဲု သၞာန်သ်ှတက်ကျာအတိုင်သၞ၀်ဝွံရ။
မိဟံင်ပြာ်။ ။ ပႛဲဗုဒ္ဓဘာသာ ဆာန် (Love) ကုဪ လျိုင် (Responsibility) မ္ဂးဂှ် မုမွဲ သဒ်ှရော။
မတ်ဒိပ်။ ။ ဆာန်ဂှ် နွံ္ဘါသာ်၊ ဆာန်တဏှာကုဪဆာန်မေတ္တာ၊ ဆာန်တဏှာဂှ် ဟွံဓ၀်ယာတဲု ဆာန်မေတ္တာဂှ် ဒ်ှဗဗွဲဓရ် နွံကုဪအခေါင်တုပ်သၞဟ် သီုညး္ဘါ။ ဆေင်ကုဪဒုင်လျိုင်မ္ဂး မွဲဘ၀ပိုယ် ပိုယ်ရ ဒးဒုင်လျိုင်ကုဪပိုယ်။
မိဟံင်ပြာ်။ ။ ယ၀်သဗီုဂ်ှတှေ် ခိုဟ်ကွေံရ၊ ဆဂး…မွဲလပ်ါတေံ ဒေါသလေ၀်နွံ၊ အတ္တလေ၀်နွံမံင်တဲု ခိုဟ်ကုဪပရေံ္ဘါသာ် ဟွံဓ၀်ယာသေင်ဟာ။
မတ်ဒိပ်။ ။ ဒေါသဂှ် ပိုယ်ကြိုင်လ၀်ပႛဲပိုယ်ဏောင်၊ ညးတႝဟ်စုတ်နင်မှ ပိုယ်ဂွံဟွံသေင်၊ ဟိုတ်ဂ်ှရ ဒေါသပႛဲပိုယ်ဂှ် ညံင်ဍေံသဂွံလ္ဂူ ပိုယ်ဝေတ်ဗ္တောန်မာန်တှေ် တဲုမံင်ရ။ ဆေင်ကုဪခိုဟ်ပရေံဂ်ှတှေ် မံင်မံင်ပႛဲလိုက်ဏံတှေ် ဒးဆုဪဟေင်ရ။ ကေတ်မွဲဓ၀်ဟွံဂွံ၊ တံင်မွဲတှေ် ဍေံကႜုင်သ္ဘီုါ။
မိဟံင်ပြာ်။ ။ ဟီုဗီုဂ်ှတှေ် လိုက်ဏံဂှ် မုရော။ ညးဂှ် ဗဒ်ှလ၀်လိုက်ဏံရော။
မတ်ဒိပ်။ ။ လိုက်ဏံမွဲဓ၀်ဟွံက အလုံစက္က၀ါမွဲ ဍေံက္တုဪဒ်ှကႜုင်အတိုင်သဘၜဍေံရ။
မိဟံင်ပြာ်။ ။ ဍေံဒ်ှကႜုင်ကေတ်တှေ် ညံင်သဂွံဒ်ှကႜုင်ကေတ်ဂှ် ညးဂှ် ဗဒ်ှလ၀်ရော။
မတ်ဒိပ်။ ။ ဓာတ်(Energy or Element)ဍေံကုဪဍေံ ဍေံဒ်ှကႜုင်ရောင်ဂးစဂွံရ။
မိဟံင်ပြာ်။ ။ ဓာတ်ဂှ် ဓာတ်ကျာ်ထာဝရ (God) ဟီုဂွံဟာ။
မတ်ဒိပ်။ ။ ဓာတ်ဂှ် သဒးဒ်ှဓာတ်ကျာ်ထာဝရဏောင် ဒကာဗျဉ်ဟီုလေ၀် ပိုယ်ဟွံစုဪဒႝာ၊ ဆဂး လ္တူဓာတ်ဂှ် တဆိပ်လုဪတက်တက်စုတ် ဓာတ်ဂှ် ဍေံဟွံပြံင်လှဲာအာနူသဘၜဍေံညိ။
မိဟံင်ပြာ်။ ။ အရေ၀်ဏံ ထပ်သောင်ကုဪညိပႜန်ဂွံဟာ။
မတ်ဒိပ်။ ။ ယွံ…ဂွံ၊ ကျာ်ထာဝရ ဗဒ်ှလ၀်လိုက်ဏံဂှ် ဒ်ှလေ၀်ဒ်ှမာန်မံင်ကီုရ၊ ဆဂး…ညးမွဲလေ၀် ထ႟းသက်သှဟွံမာန်။ ပိုယ်ဟီုဍေံဒ်ှကႜုင်ကေတ်ကေတ်ဂ်ှလေ၀် ညးမွဲထ႟းသက်သှဟွံမာန်ကီုတုပ်။ ဟိုတ်ဂ်ှရ..အ္စာပိုယ်မှာဂေါတမ ညးဟွံတွံပရူလိုက်မွဲလှေ်။ ညးတွံပရူဒဒိုက်မႝိဟ်၊ ညးကုဪနဲဗီုသဂွံတိတ်ဗႜးနူဒဒိုက်မႝိဟ်ဂမႜိုင်ရ။ ညးကႜုင်ဒ်ှကျာ်ဂှ် ညးကႜုင်သ္ပသုတေသနလိုက်ဟွံသေင်၊ ညးကႜုင်ဟံင်ပြာ်သတ်တံဏောင်ဟွံသေင်ဟာ။
မိဟံင်ပြာ်။ ။ ဆဂး…အ္စာသိပ္ပံတံဆဪုမံင်ပရူလိုက်တၞာဂလိုင်။ အတိုင်ညးတံဆုဪလ၀်ဂှ် ဍေံဒ်ှမံင်ဂုဏ်ဖုဪမႝိဟ်တဲု ဒ်ှဟံင်ပြာ်မံင်ဒဒိုက်မႝိဟ်ကီုတုပ်သေင်ဟာ။
မတ်ဒိပ်။ ။ ဇၞာပ်ဇၞာပ်ဓရ်သင်္ခါရ ဂုဏ်ဖုဪကုဪဒုဟ်ဂှ် ဍေံလုပ်လၞိဟ်သ္ဘီုါ ဟီုလ၀်တဲုကီုရ။ ဓရ်သင်္ခါရဂှ် ဍေံလီု၊ ပိုယ်ဂှ် ပလေ၀်တဲုမံင်အာ။ လၞုဟ် ဒကာဗျဉ်ကႜုင်ဘာဏံ ဍိုက်ကႜုင်ကွှသေင်ဟာ။ ကွှဒကာဗျဉ်ဂှ် နူစရာန်တေံ ဍေံတၞိတျာမံင်သေင်ဟာ၊ လၞုဟ်…စကာလ၀်ဍေံလံ ဟွံဒးဗႜံဟွံဒးနာပ်ဟာ၊ ပလေ၀်ခႛင်လီုခႛင် ပယျေဝ်ခႛင် ပရေံစှေ်ခႛင်သေင်ဟာ။ ပလေ၀်လ၀်ပယျေဝ်လ၀်တဲု ရံင်မၝးဏံ ညံင်ကုဪခိုဟ်ညံင်ကုဪတၞိတိုန်ကီုလေ၀် အပႛဲတေံဂှ် ဓာတ်ဍေံဟွံတၞိတိုန်ရဏး။ အ္စာသိပ္ပံတံလေ၀် ဗီုဂ်ှကီုရ။ လၞုဟ် အ္စာသိပ္ပံတံပလေ၀်မံင်လိုက် ဇြောတ်ပ္တိတ်မံင်ခၞုဟ်ဓာတ် ဍေန်လ၀်ပၞတ်ဓာတ်တၞး။ ညာတ်ပၞတ်တၞး အဲလေ၀်စိုပ်ကႜုင်အမေရိကာန်ဏံကီု။ ဆဂး ခၞုဟ်ဓာတ်ယ၀်သအောန် လိုက်ဏံဂမ္တၜကႜုင်၊ လိုက်ဏံယ၀်သဂမ္တၜကႜုင် ဍ်ာကလောံတံဂ်ှလင်ဇွောဝ်၊ ဍ်ာကလောံတံဂှ် ယ၀်သလင်ဇွောဝ်အာဖအိုတ် လိုက်ဏံဗႜိုက်အာမာန်မံင်ဏောင်။ ပိုယ်ကော်စ လိုက်လီုဂုဏ်ဍာ်။ တီမံင်ဖိုဟ်လီုဏောင် ဒေါံထောံဟာ။ ညးမွဲဟွံဒေါံ။ လောဘစကာလ၀်ပိုယ်။ ဒေါသစကာလ၀်ပိုယ်။ ဆုဪလ၀်နဲကဲသိပ္ပံတံဂှ် စကာထောံသွက်လောဘသွက်ဒေါသအိုတ်။ ညးဂှ် ဗဒေါံညးတံမာန်ရော။ ညးမွဲဗဒေါံဟွံမာန်။ ပတှေ်စှေ်စိုတ်။ ယ၀်သပတှေ်ဂလာန်ဏံတှေ် ဂလာန်လိုက်လီုဂ်ှလေ၀် သဒးပတှေ်ကီုဏောင်။
မိဟံင်ပြာ်။ ။ ဓရ်ဗုဒ္ဓဘာသာဂှ် အဲဍိက်ဒးမံင်စိုတ်ကီုရ။ ဆဂး ဟီုမံင်ပရူလီုကႜးကႜးဂ်ှလေ၀် ဍေံဟွံစှေ်ဗီု။ ဥပမာ…လၞုဟ် စပ်ကုဪလိုက်လီု။ ဗီုလုဪထိင်ထိင် ဍေံလီုတွုဪဂှ် ဟွံဒှ်။ ယ၀်သဗီုဂ်ှရတှေ် ဗီုလုဪသဂွံစၞှ(Hope)စရော။ သွက်သဂွံစၞှစဟွံမွဲမ္ဂး ဂျိုင်မံင်လၞုဟ်ဂှ် မုအဓိပ္ပဲါနွံရော။
မတ်ဒိပ်။ ။ ဂလိုင်စၞှလ၀်ဂှ် ဂလိုင်လုဪဍိုက်ပေင်ကီုရော။ ဇဲဝှရိယဂှ် ဒးသ္ပပဓာန်ကီုလေ၀် စၞှလ၀်ဂႜိုင်တဲု အတိုင်စၞှလ၀်ဂှ် ဟွံဒ်ှကႜုင်တှေ် စိုတ်ဓာတ်စှေ်။ ဍာံဍာံတှေ် မုဍေံဒ်ှမံင်ဂှ် အခေါင်မႝိဟ်တံတီနွံမံင်။ ကုဪဍေံတီဂှ် ကုဪဍေံစိုတ်ဓာတ်စှေ်ဟွံသေင်။ ကုဪသတိကုဪဍေံတဲု သကုဪဍေံပလေ၀်လိုက်ဏောင်။ ဒႝဲာလုဪလီုမံင်၊ ဗီုလုဪလီုမံင်ဂှ် တီတဲုမှ ပလေ၀်ဂွံ။
မိဟံင်ပြာ်။ ။ ဂလာန်ဏံ ဒးမံင်။ လညာတ်သမ္တီဗုဒ္ဓဘာသာဂှ် သႜုင်ပြဲမံင်ရ။ သဂွံဒ်ှကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာခိုဟ်မွဲဂှ် ဗီုလုဪဒးသ္ပရော။ ဒးမံင်ဗီုတႜဂုဏ်ဟာ။
မတ်ဒိပ်။ ။ လောန်ကႜုင်္ဘါဂိတုတှေ် သၞတ်အမေရိကာန်ဗုညး္ဘါ စိုပ်ကႜုင်ဘာဏံ။ သၞတ်္ဘါဂ်ှဟီု ညးတံထေဲကုဪကျာ်ဇေႝာ်သင်ခရေတ်တဲု မိက်သဂွံပကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာ။
မိဟံင်ပြာ်။ ။ တဲု ဗီုလုဪတႜဂုဏ်ဟီုကုဪဍေံတံရော။
မတ်ဒိပ်။ ။ မိက်သမိက်သဂွံဒ်ှကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာခိုဟ်မွဲမ္ဂး သ္ပသင်ခရေတ်ခိုဟ်မွဲကႜာ။
မိဟံင်ပြာ်။ ။ အရေ၀်တႜဂုဏ်ဒး။
မတ်ဒိပ်။ ။ အဲမိက်သဂွံဟီုဂှ် မိက်သဂွံပဗုဒ္ဓဘာသာခိုဟ်မွဲဂှ် ဟွံဒးထေဲကုဪသင်ခရေတ်တံညိ။ ဟီုညးတႝဟ်ပရေံမှ ဗုဒ္ဓဘာသာခိုဟ်တိုန်ဟွံသေင်။ ဒကာဗျဉ်လေ၀် ဗီုဂ်ှရ။ ပတှေ်ကျာ်ထာဝရတှေ် လ္ပပတှေ်ပါဿတာချာတ်ခ်ျ။ မိက်သဂွံညာတ်ကျာ်ထာဝရတှေ် ရံင်ထ႟က်ထောံပါဿတာ။ တုပ်တုပ်ရ…မိက်သဂွံညာတ်ကျာ်တြဲတှေ် ရံင်ထ႟က်ထောံအဲ။ ရံင်ဒုဪကုဪစိုပ်ကျာ်။ မုဒ်ှရောဟီုတှေ် အဲဂှ် သ္ပမံင်စႝးကုဪကျာ်တြဲဟွံသေင်။ ပႛဲဗုဒ္ဓဘာသာပိုယ် ညးမွဲလေ၀် သ္ပစႝးကုဪညးသ္ကံဟွံဂွံ။ ဇကုဇကုဂှ် ဇကုရ ဒးသ္ပစႝး၊ ဇကုဇကုဂှ် ဇကုရ ဒးကေတ်တာလျိုင်သေင်ဟာ။ မိက်သဂွံဒ်ှကောန်ညးခိုဟ်မွဲမ္ဂး ကွာ်စမ်ရံင်ဂႜံင်ညး။ ဒးရးမှ ဆက်ကွာ်။ ဟွံဒးရးတှေ် ကလေင်စၜထောံ။ ကျာ်တြဲပိုယ် ညးဟွံဗျိ။
တက်ကျာသၞာန်သ်ှတဲု မတ်ဒိပ်ပလံင်ပ္တိတ်ဏာေၟာံခန်ရာမည ဌာနတေက်မံင်ဇာတ်တေံရ။ အဲသောင်လၜထ႟းကုဪပရူဗုဒ္ဓ၀င်ကေုာံအခိုက်လှေ်မန်ညိညတဲု ညးသၞာန်ပရူဘာမန်ကုဪဘာဗၞာရ။ ဆေင်ကုဪကာသာသႝာမ္ဂး ပံင်ဖက်ညးသ္ကံတဲု ဆေင်ကုဪကာဍုင်ကွာန်မ္ဂး ဒဒ်ှရပ်ါခြာမံင်ဂှ် ထပ်သောင်ကလးကုဪရ။ အဃောဂှ် ကောန်႞ာ်ဝုတ်္ဘါ ရပ်ဂွံကၞဟ် ကွဟ်တိုန်ဘာတဲု ညးမွဲဟွံဒးစကာ တီတာလျိုင်ဗီုဏံဂှ် စိုတ်ဓာတ်ဂကူမန်တံ သႜုင်ပြဲတၜဗွဲမလောန်ရောင် ညးထိုင်သးရ။ ၂၀၀၈ တေံမ္ဂး ညးတံ ဆိင်လ၀် သွက်သဂွံထပ်ရင်တႜုင်နင်ဍုင်ဝှတ်ဝုင်ဏံကောန်ညးဒဒိုက်ဍုင်မန်ဗၞာ (၈၀၀)ပႜန်ရောင် ညးလၜထ႟းစရ။
Posted by မတ်သာင် at 4:54 PM No comments:
Posted by မတ်သာင် at 4:30 PM No comments:
မတ်ဒိပ်။ ၀ှတ်ဝုင် ဒှဇြေမ်ပါ ၀၃၊ ၂၀၀၇
နူကဏေံတေံဗ္တံ(၉)နာဍှ ဟိုတ်နူတကိုတ်တၝုဪက္တုဪဒ်ှပႛဲဘာမန်ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရတဲု ဗႜဲာသၞိင်တံလေ၀်ကောံကႜုင်၊ ဒကာမန်တံလေ၀်ကောံကႜုင် မႝိဟ်ကောံကႜုင်ဟောကႜံင် ဒ်ှအာရုသံင်တၞာဂလိုင်ရောင် မတ်ဒိပ်ဂွံပရိုင်ရ။ အတိုင်ဟိုတ်ဥပ္ပတ်မ္ဂး အဃောဒကာဗျဉ်မိညောအ်ကေုာံတႜဂုဏ်ကံပံက်ကျာမံင်တ၀်လဟီုဂှ် ကျာ်ဇေႝာ်စန္ဒိမာကုဪမာံကံနှာတ်ခႛံက်တြင်၊ ခယျဂးဂလာလမ်စံက်ကႜုင်ပႜန်တဲု ကောန်ဒကာဗျဉ်ဂှ် ဆက်တ၀်လဟီုကုဪဗႜဲာသၞိင်တံ၊ တ၀်လဟီုဂှ် စိုပ်ကႜုင်နဲာမတ်ဒိပ်တဲု နဲာမတ်ဒိပ်လေ၀် စေႜာံဏာစိုပ်မွဲမန်ဝှတ်ဝုင်ရောင်ကလောတံ။ ဘာမန်ဝွံ ဒမႜလုပ်ဂွံ္ဘါဝါတဲု ကျာ်ဇေႝာ်အ္စာစန္ဒိမာ ဒ်ှဓ၀ိင်လောန်၊ အာရာန်လ၀်လွဟ်ဂေႜံဂေႜံမွဲထကိုဟ်၊ ပႛဲဂိတုန၀်ဝေမ်ပါအိုတ်ဂှ် အာစမ်လ၀်လွဟ်ဂှ် ပႛဲဘာဗၞာဇေတ၀န်၊ ဒၞါနူဂ်ှတဲု ဗႜဲာသၞိင်တံ ကေႜင်ဒက်လ၀်ကျာ်ဇေႝာ်စန္ဒိမာပႛဲစာတ်မွဲဗတံ၊ လၞုဟ် ကလိုက်ကၞုဪတိုန်ပႜန်တဲု လက်သဏ်ခိုဟ်မွဲဟွံသေင် ညးဂမႜိုင် တော်လ၀်ရ။
္ဘိုန်ရကျာ်ဇေႝာ်အ္စာစန္ဒိမာဟွံမြော်ပတိတ်ကီုလေ၀် မႝိဟ်မကုဪလ၀်ကသပ်ရာန်လွဟ်ဂှ် သဒးဒ်ှလကျာ်ဗၞာတံကီု၊ ဍေံကုဪအာစမ်လွဟ်ပႛဲဘာဍေံတဲု စမ်တဲုခါဏံ ဗႜဲာသၞိင်တံ ရပ်ဏာဓ၀ဲါဂ်ှဂှ်ကီု၊ ဘာဗၞာ နွံ္ဘါမတဲု ဍေံကုဪစမ်လွဟ်ဗ္ဒဲာဘာဍေံတူအာမွဲမဂ်ှကီု၊ တဲုဍေံတံ တရးမံင်ပရိုင်ကျာ်ဇေႝာ်အ္စာဂတိုက်စမံင်ဂ်ှကီု တေၞင်တၞဟ်မံင်တဲု ညံင်မန်တံသဂွံထဲု ဗၞာတံလုပ်ပထဲုမံင်ဟာဂှ် သဒးစၞှစၞတ်အာထေက်ရောင်မန်လၝုဪတံပႜုပ်ဂလာန်ရ။
မန်လၝုဪတံဂှ်္ဘိုန်ရညာတ်ဒုဟ်ဗၞာတံကီုလေ၀် ညံင်ကျာ်ဇေႝာ်အ္စာစန္ဒိမာ ဟွံဂွံဆက်ဆောံကုဪဗၞာတံကီု၊ ဘာဗၞာကႜတ်ဒေပ်လ၀်လွဟ်ဂှ် ဟွံဓမံက်မွဲသာ် ဓမံက်မံင်ဒုဟ်ဒဏ်ဇကုကုဪဇကုသက်သက်ကီု၊ ပႛဲကာလအန္တရဲာဒဒိုက်သႝာမွဲမွဲက္တုဪဒ်ှကႜုင် ဟွံဘိုင်ရီုဗင်မင်မွဲညးသ္ကံမွဲဓ၀်ဟွံက သီုဆေ၀်ဒ၀်ဒႝာတာညးမရီုဗင်ကီုဂှ် ဒးဗျိမန်ကုဪမန်ဟေင်ရောင် ထံက်ထ႟းမံင်ရ။
"အဲဍိက်စိုပ်မံင်အဏံ တၞာလံရ၊ အဲဍိက်ဟွံနှၜကုဪမန် မံင်ထောံသောင်သောင်ဂှ် ဂုဏ်နူမန်တံဏံ ပ်ါမံင်ကဆံင် ရံင်မံင်ပူဂုဪရဏောင်" သ်ာဝွံ အ္စာသ၀်အံင်နန္ဒ (ဇာတိကွာန်ခယျး) ပံက်သြိုဟ်ကုဪမတ်ဒိပ်ရ။ အ္စာသ၀်ဝွံ္ဘိုန်ညးဟွံသႝၜရၜအကြာဂကောံမန်ကွေံကွေံကီုလေ၀် ပႛဲကာယေန်သႝာင်မ္ဂး ညးဗလးနင်ကောန်ညးသကုဪလှေ်ကွဲာလၞိုန်ရောင် မန်မွဲတႜလၜကုဪမတ်ဒိပ်ရ။...
Posted by မတ်သာင် at 12:14 PM No comments:
ဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန် (၀ှတ်ဝုင်) ပလေ၀်ပလေတ်သွက်ကောံဓရီုဇေႝာ်
မတ်ဒိပ်။ ၀ှတ်ဝုင် ဒှဇြေမ်ပါ ၀၂၊ ၂၀၀၇
သွက်သဂွံသၝှဂႜိပ်လေၞင်ကမေႜာန်ဌာနဂမႜိုင်ကီု၊ ဂကောံညးဗြၜကေုာံဂကောံသၞတ်တံ သွက်သဂွံပတိုန်ထ႟းနွံကီု၊ သွက်သဂွံသၝှဂႜိပ်သေႝာဝ် MRC ကီု၊ သွက်သဂွံချူဓဇက်အစှဇန်ပေဲါကောံဓရီုဇေႝာ်ကီု မပ္တံသ်ာဝွံ ရန်တၞံတဲု ပႛဲတၝဲဝွံဟေင် ဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန် (၀ှတ်ဝုင်) ကေႜာန်သ္ပလ၀်ပေဲါကောံဓရီုမွဲရောင် မတ်ဒိပ်ဂွံပရိုင်ရ။
Posted by မတ်သာင် at 1:04 AM No comments:
.မတ်ဒိပ်။ ၀ှတ်ဝုင် ဒှဇြေမ်ပါ ၁၊ ၂၀၀၇
ဂကောံညးဗြၜမန်ကၞိန်ဍုင်အမေရိကာန်ဝွံ ဒ်ှဂကောံမံႝုကုဪဍ်ာသကေ၀်မပေင်မွဲတဲု ပႛဲကာပညာကီု၊ ပႛဲကာယေန်သႝာင်ကီု ရင်တႜုင်စိုပ်တရၜ ဗွဲမလောန်ရ။ ဂကောံညးဗြၜမန်ကၞိန်ဍုင်အမေရိကာန်ဝွံ ဒ်ှကႝာင်ဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန်တဲု ဒံက်တာမိစရဲာမန်ဂှ် ကေတ်လ၀်တာလျိုင်ဥက္ကဋ္ဌရ။
သွက်သဂွံသှကႜှကာနာနာသ်ာတဲု ပႛဲတၝဲဝွံဟေင် ဂကောံညးဗြၜမန်တံ ဂ္ဇံတက်ဝိုင် ပႛဲေၟာံခန်ရုင်ညးဗြၜရ။ ပႛဲကောံဓရီုဂှ် နဲာမတ်ဒိပ်လေ၀် ကာယေန်သႝာင်တၝဲဂကူမန်ကီု၊ ကာကမေႜာန်မဆေင်စပ်ကုဪလေၞင်ကမေႜာန်ဂကောံကႝာင်မႝုံသၞ၀်တဲဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန်ကီု၊ ကာကွတ်ဗ္တောန်သ္ပကောန်ဍုင်အမေရိကာန်ကီု၊ ကာသာသႝာမစပ်ကုဪအဘိဓရ်ကျာ်ကီု ပ္တိုန်ထ႟းဏာကီုရ။ တင်ဂႝင်နဲာမတ်ဒိပ်မပ္တိုန်ထ႟းလ၀်ဂှ် ဂကောံညးဗြၜတံ တုပ်စိုတ်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ရောင်ဂွံပရိုင်ရ။
Posted by မတ်သာင် at 12:00 AM No comments:
လိက်ဘိက်လၞိင်စိုတ်ဓာတ် အာတ်အရီုဗင်တၝဲဂကူမန် ၆၁၀ါ
မတ်ဒိပ်။ ၀ှတ်ဝုင် န၀်ဝေမ်ပါ ၂၉၊ ၂၀၀၇
တၝဲဂကူမန်ဍုင်အမေရိကာန်ဂှ် လုပ်လၞိဟ်ပႛဲတၝဲဂကူမပြာကတ်မွဲ ပႛဲဍုင်ဝှတ်ဝုင်ရ။ တၝဲဂကူမန်(၆၀)၀ါသႝာံတဲုကႜုင်တေံဝွံ အလုဪဇကုအမာတ်စႝး မဂ်သောတာ (Mark Souder) တိုန်စိုပ်လ၀်ရ။ ဟိုတ်နူအမာတ်စႝးတိုန်စိုပ်လ၀်တဲု တၝဲဂကူမန်ဂ်ှလေ၀် ညးတီဂႜိုင်တိုန်ရ။ ပႛဲသႝာံဝွံ ဒက်လ၀်ကမ္မတှတၞိတဲု ကမေႜာန်လၝုဪ မိက်ဂွံလ္ဇဲုလ္ဇမံင်ညိရ။ ဗွဲတေၞင် ဌာနယေန်သႝာင်ဂှ် ဂကောံမႝိဟ်ဗြၜရပ်လ၀်တဲု ပႛဲတၝဲရဲုစ်ှကမ္မတှတၝဲဂကူမန်သႝာံဝွံ ကႛိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံညးဗြၜမွဲတႜဟွံပါဂှ် ဂွံဆုဪကေတ်ရ။ ဗီုဂ်ှကီုရ နူဂကောံသၞတ်ဒုင်ရဲုစ်ှလ၀်ဟွံမွဲမွဲတဲု တင်ဝါတ်ဂါတ်နွံမာန်ဂ်ှလေ၀် ညာတ်ကေတ်မာန်ရ။ ပႛဲကၞိန်ဍုင်အမေရိကာန်ဝွံ သွက်သဂွံပလေ၀်ပလေတ်သွက်တၝဲဂကူမန်ဂှ် တၝဲသၝိသ၀်ကုဪတၝဲအဒိုတ်ဟေင် ဂွံအခိင်တဲု ပေႝာဝ်္ဘါတၝဲဂှ် တၝဲသၝိသ၀်ဟေင် မိမမန်တံ စိုတ်ထတ်ဂႜိုင်ရ။ သၞတ်ဝုတ်ဗႜဲာအာယုက်ဟွံပေင်(၁၈)သႝာံဂှ် ညးမွဲဓ၀် ဒႝဲာလုဪလေ၀် အခေါင်အာကႜုင်ဟွံမွဲတဲု ကောန်ကႜုင်မ္ဂး မိမလေ၀် မံင်ဟွံဂွံ ဒးဗက်ကႜုင်၊ အခိုက်တၝဲယးဂ်ှလေ၀် သဒးအာကမေႜာန်ပႜန်ရ။ ဟိုတ်ဂ်ှရ ဒးလွ္ဘှံင်လ၀်စိုတ်ဓာတ်ကွေံကွေံမှ အကြာဓကဲုအကြာဓညော် သဂွံဂႜာံစိုပ်ကႜုင်ဘာရ။
တႝဟ်နသဂွံပတိုန်စိုတ်ဓာတ်ညိဂးတဲု ကမ္မတှတၝဲဂကူမန်ပတိတ်လ၀်လိက်ဘိက်လၞိင်စိုတ်ဓာတ် အာတ်လ၀်အရီုဗင်သွက်တၝဲဂကူမန်ဂှ် သၞ၀်ဝွံ သၝှဗ်ှတၜအိုတ်ညိအၜ ...
စိုပ်ကႜုင်မွဲဝါပႜန်ရ ကလောမန်တံ...တၝဲဂကူမန်။ ပႛဲဘ၀ပိုယ် တၝဲက္တုဪဒ်ှမႝိဟ်ဂှ် ညံင်ရၜမႝုံတၜုကဪုအဓိပ္ပါယ်ကီု တၝဲဂကူမန်ဂှ် ဒ်ှတၝဲပတန်ဍုင်ပိုယ်တဲု နွံတၜကုဪအဓိပ္ပါယ် ဗွဲမဂႜိုင်ရ။ ဇၞာပ်မႝိဟ် တၝဲဝိဇာတမင်္ဂလဂှ် ဒ်ှတၝဲကိစ္စမဇေႝာ်တဲု ဇၞာပ်ဂကူမန် မ်ာမွဲစွေက်ဂှ် ဒ်ှတၝဲမပြဲတၝဲဍုင်မန်သႜးဂႜးဂ၀်ရ။ ဍုင်ဟံသာဝတှ သႜးဂႜံဂ၀်တဲု လၞုဟ်ပွိုင် ၁၄၃၅သႝာံ မံက်မွဲတဲဗႜိုက်မွဲတဲ သႜုင်မွဲစုတ်သ၀်မွဲစုတ် ဇွောဝ်ဟှမံင် ပႛဲဇေၞာဝ်၀င်ဂႜးတိရ။ ဍုင်ဟံသာဝတှလီုတဲု ပွိုင် ၂၀၀သႝာံပြင် မန်ပိုယ်ဝိုတ်တႜိင်မံင်မသ ပမံင်မႝိဟ်ဒယ်ှအကြာဂကူညးတႝဟ် ဗၞာတံကုဪလ၀်တဆိပ်သေဌှတဲု နဲာချေတ်လှာင်မွဲ ဒုဪကုဪ၀ါတ်အာဒ်ှဂွံ ယိုတ်ထောံ ထံက်ပင်ကႜုင်အံင်ဆာန်တံမွဲကႛိုပ်...အိုယ်...ကာလဍေံတံဗႜး္ဘး ယၞုဇကုလေ၀်ကေႜံ ဘ၀ဇကုလေ၀်လီု ညးမွဲဟွံရီုဗင် ဟွံမင်မွဲဂကူဇကုရ။ ပဲါနူဍေံသဂွံမင်မွဲဇကုဂှ် မန်ကုဪဗၞာတုပ်တုပ်ရ၊ ဂကူမန်ကႜက်မံင်အိုတ်ယျ၊ မႝိဟ်ချိုတ်ချိုတ် က္လေင်ပႜုပ်လမျီုဟွံဂျိုင် သ်ာဝွံ ဥူနုကုဪဗော်ဖဆပလတံ ပဝေင်စရုဪ က္တုဪဝေင်ဂရိုင် ဟွံဂိုင်သမ္တီလ၀်မန် နဒဒ်ှဂကူမွဲရ။
ကာလဂှ် အ္စာဖ၀်ချဝ်ပိုယ်္ဘိုန်ရဗြုအရေ၀်မန်ဟွံဂွံကီုလေ၀် မိႝဟ်ချိုတ်ချိုတ်ဂှ် အဲပႜုပ်လမျီုရောင်ဂးတဲု စန်ဒက်ကႜုင်ဂကူမန် ကေႜာန်ကႜုင်တၝဲဂကူမန်...အိုယ်...လၞုဟ် မန်ကုဪဗၞာဟွံတုပ်ဂ်ှလေ၀် ညးဂႜးတိတံတီအိုတ်ယျ၊ ဂကူမန်ဟွံကႜက် သှေ်္ဘက်မံင်ဏီဖိုဟ်ဂ်ှလေ၀် ဂွံဆုဪကေတ်နမတ်အိုတ်ယျ၊ မႝိဟ်ချိုတ်ချိုတ်ဂ်ှလေ၀် က္လေင်ဂျိုင်တိုန်အိုတ်ပႜန်ယျသွံ..။ တၝဲဂကူမန်ဝွံ ညံင်ရၜမဒ်ှတၝဲဍုင်မန်သႜးဂႜံဂ၀်ကီု သီုကဪုမဒ်ှမံင်ဂဥဲုအမြိုတ် မႝိဟ်ချိုတ်ချိုတ်သ္ကုဪက္တုဪဂျိုင်တိုန်မာန်မံင်ဏီသွံ...။ အၜ...အသ၀်ဂုဏ်တၝဲဂကူမန် သႜဲလးလောန်သန်သွံ...။
တၝဲဂကူမန်မႝုံကုဪအသ၀်ဂုဏ်မသႜဲလးဝွံ သႝာံဝွံမ္ဂး ဂါမ်လုပ်အာမရနုက်ကုဪ ၆၁၀ါရ။ တၝဲဂကူမန်ဝွံ ဇၞာပ်မန် မမိက်ကုဪနွံကုဪစရဲာကျာ်သြှတဲု စရဲာကျာ်သြှဂကူမန်ဇကုဂ်ှလေ၀် မမိက်ကုဪညးဆုဪ မမိက်ကုဪညးဗဪုရ။ ပႛဲကာထ႟းပျးစရဲာကျာ်သြှဂကူဂှ် အခိုက်ကႝာယေန်သႝာင်မွဲ ဒ်ှအဓိကတဲု သွက်သဂွံလှေ်ကွဲာပတိုန်စရဲာဂကူဂှ် ပၞိက်ဇေႝာ်တၜဗွဲမလောန်ရ။ ဟိုတ်ဂ်ှရ...ညံင်သဂွံဍိုက်ပေင်ကုဪစရဲာကျာ်သြှမာန်ဂှ် မာံ/နဲာ/မိ..........................သြ၀်ဗိုင်ကေတ်ကုဪတာလျိုင်လှေ်ကွဲာ...............................မွဲဝါညိဂှ် ဂကောံကမ္မတှတံ အာတ်ဏာအရီုဗင်စိုတ်ဓာတ်ရအၜ...။
ကျာ်တြဲက၀်ဏံကႜာအိုတ်ဂှ် ယၞုညး ကက္ကုသန် ဂကူညးဂှ် မန်၊ ပႛဲကျာ်လ္ဂုင်ဂှ် မန်ပိုယ်သႜိုင်လ၀်ဓာတ်ကျာ်မလောန်စၜအာနှဗာန်ပန်ဇကုတဲုယျ၊ ကျာ်တြဲအရိယျ သှေ်္ဘက်မံင်မွဲဇကုဏီ၊ အခိင်ညးဒ်ှကျာ် ယ၀်သဂကူမန်ဟွံမွဲ ညးလုဪမွဲ သဂွံသႜိုင်ဓာတ်ညးအပႛဲကျာ်လ္ဂုင်ညိပႜန်ရော...ကလောတံ။ ဟိုတ်ဂ်ှရ...ဂကူမန်ဒတန်က၀် သဂွံတန်တၜအာဒုဪလအိတ်က၀်မာန်ဂှ် သာသႝာလေ၀် ပိုယ်ဒးလျုင် ဍုင်ကွာန်လေ၀် ပိုယ်ဒးပတန် ဂကူမန်လေ၀် ပိုယ်ဒးမင်မွဲ တၝဲဂကူလေ၀် ပိုယ်ဒးကေႜာန်ရောင်ဟွံသေင်ဟာ။
Posted by မတ်သာင် at 10:28 PM No comments:
Some Place-names in Monland (Lower Burma): More places around Rangoon
In the recent post, the name of Pazundaung was explained and on this post, I wish to present some names around Rangoon. Please continue to explore some names of Mon origin.
Also in the case of (တာမွေ) Tamwe, (ဘောက်ထော်) Bhokthau, (ကမာရွတ်) Kamarwat, (မင်္ဂလာဒုံ) Mangaladum and (အင်းစိန်) Ancin, we find that Mon names have become Burmanized. The Mon way of spelling these names are as follows: _
In Mon it is spelt (တာမွဲ) Tamwai which means " the place with one palmyar palm tree". Ta from Tala (Pali)= palmyra palm tree; mwai (Mon) = one. Therefore Tamwai is the Mon equivalent ofacommon Burmese place name, " Thantapan) (ထန်းတပင်).
In Mon this name is spelt (္ဘိုပ်ထ၀်) Buip Thaw and it means " the place ofagolden swan ", (္ဘိုပ်) ' buip is swan or Hamsa in Pali and ( ထ၀်) thaw, gold or golden in Mon.
Kamayut (ကမာရွတ် = Kamarwat)
Mon spelling ofr this is (ကမာရတ်) Kamarat meaning "precious lake"; (ကမာ) kama isalake and (ရတ်) rat which is derived from Pali word (ရတန) ratana isagem or precious thing. Therefore it isaplace called after the " Precious Lake" which is the former name of the Inya Lake.
Mon spelling for this name is (အင်စိင်) ancin. (အင်) an means "anatural pond" and (စိင်) cin an elephant. Therefore it means "apond frequented by elephants".
With regard to this name, there are two possible interpretations. One is (မင်္ဂလဍုင်) Mangala dun,acombination of Pali and Mon words, meaning "atown of blessedness". (မင်္ဂလ) Mangla=blessedness, blessing; (ဍုင်) dun=town. The other is (မင်ဂြဲာဍုင်) mangrai dun,apure Mon name and means "atwon of red deer and barding deer". Besides these two names, it hasaPail classical name. In the Mon historical record called (သ္လပတ်ဝင်ဓာတ်ဗဂုဪ) "Slapat wan Dhat Baguiw", it is identified as Rammavati which means in Pali "a place of delight".
Posted by မတ်သာင် at 5:36 PM No comments:
ဘာမန်ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ ဒမႜလမ်စံက်ပိတႜ လုပ်ဗတိုက်ပႜန်
မတ်ဒိပ်။ ၀ှတ်ဝုင် န၀်ဝေမ်ပါ ၂၅၊ ၂၀၀၇
ဘာမန်ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ၀ွံ နူကဏေံတေံ လလးလ၀်ကထိုန်တဲု တန်ဒ်ှသြန်သဒးနွံပႛဲတဲရောင် တော်ကေတ်တဲု တၝဲဏံ ပယာံနူဂယး ဂလာလမ်စံက် (၃)တႜ ကလေင်စိုပ်ကႜုင်ပႜန်တဲု ဗတိုက်ပႜံင်္ဘးဏာပႜန်ရောင် ကျာ်ဇေႝာ်အ္စာစန္ဒိမာ ဂးရ။ အလန်ဝွံ ဟိုတ်နူသတိနွံမံင်တဲု မုမွဲလေ၀် ဍေံကေတ်ဏာဟွံဂွံကီုလေ၀် ဓရ်ဂ၀ိင်ညးဂမႜိုင် ဇေႝာ်တိုန်မံင်ရ။ ဘာဇေတ၀န် ဒးဒုင်စံင်အာမွဲမကီု၊ ဘာဗုဒ္ဓဘာသာမန် ဒးဒုင်ပန်လ၀်မွဲဝါကီု၊ လၞုဟ်အဆက်ဆက် ဘာမန်ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ ဒးဒုင်ဗတိုက်္ဘါဝါကီု ဂဗုတ်ဓမ္မတာမွဲ ဒ်ှဟွံဂွံ သ်ာဝွံ ညးလၝုဪထေင်သေႜဟ်တၜရ။ ညးလၝုဪတံဂှ် ဟိုတ်နူပရေင်ပိုန်ဒြပ်ဍုင်အမေရိကာန်စှေ်မံင်တဲု ကမေႜာန်ဟွံမွဲ သြန်ဟွံမွဲတဲု ဂလာတံဏံ ဒးဗတိုက်စမံင်ရောင် ဆိင်ခယျကေတ်ရ။ ပႛဲဍုင်အမေရိကာန်ဝွံ ဂဗုတ်ဗွဲမဂႜိုင် ဂလာလမ်စံက်တံသၞး လုလောန်စဒ်ှရ။...
Posted by မတ်သာင် at 10:00 PM No comments:
သၝိနဲာတိဿ တိုန်သၝိတၞိ ဖာပ်သင်
ရန်တၞံကုဪတိုန်သၝိတၞိတဲု နဲာတိဿ ကုဪဒါန်ဖာပ်သင်ရ။ ပေဲါဖာပ်သင်ဝွံ နူဘာဗုဒ္ဓဘာသာမန် ဍုင်ဝှတ်ဝုင် သင်(၈)ဇကု၊ နူဘာမန်ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ သင်(၂)ဇကု ပံင်သင်(၁၀)ဇကု ကၛစိုပ်ရ။ ပရိသာတ်မှာဇန်ဂမႜိုင် တိုန်စိုပ်ကုဪဇြဟတ် ဗွဲမဂႜိုင်တဲု တႜဂုဏ်အ္စာဓရ် (ဣန္ဒသာရ) ကုဪသှတွံဓရ်စရိုဟ်ဍ်ာရ။ သၝိနဲာတိဿဝွံ ဒ်ှသၝိမထိင်ဒက်မင်မွဲယေန်သႝာင်မန်မွဲတဲု ပကတ်ပကေင်လ၀် ကောန်ဇာတ်ဂမႜိုင်လေ၀် ခိုဟ်မိုဟ်ဒးရးတၜဗွဲမလောန်ရ။ ပႛဲကမ္မတှမကေႜာန်က္တုဪဗဒ်ှတၝဲဂကူမန် (၆၀)၀ါဂှ် ဒ်ှညးမကေတ်လ၀်တာလျိုင်ဌာနထ႟းပျးတဲု ပႛဲပေဲါပြိုင်ဟီုဂလာန်စၞတ်တၝဲ (၂၃)တဲုကႜုင်တေံဂ်ှလေ၀် နူသၝိနဲာတိဿ လုပ်ပြိုင်ဟီုဂလာန်ညးပန်တႜ ကလိဂွံအာလာပ်(၃)တႜဂှ် ဂွံဆုဪကေတ်ရ။ ...
Posted by မတ်သာင် at 9:14 PM No comments:
Lulumommon honored by the South Side High School
Here is her writing. Read and enjoy!
I’m an 11 grade student from SSHS and I have been here (US) for two years but I think I’m still struggling with the pronunciations for most of the English words even though the others say I learn fast. However, I know myself that I try hard so I told myself “self, why don’t you try to join the speech team from your school since you are sociable and love to speak?” I know speech team is for an American who really, really good at English speaking and I’m Asian and also only ESL student. My English teacher was so surprised when I told her I joined the speech team and (of course) I would go to speech competition.
Therefore, I went to speech meet and listened to the others because the only way that helps me learning so fast is watch and listen to the others. I felt so weird andalittle afraid people would make joke of me when I’m the only one who is Asian and couldn’t speak English well in the room. I think again and again not to go speech meeting on every Tuesday after school because there is seemed to me likeastory which was usually told by my grandparents when I wasalittle girl. The story was about the turtle that was the slowest animal went running competition with the rabbit. As you know rabbit ran very fast and there was no way for turtle to win the rabbit. However, he never gave up and he just ran and ran as he could. At the end turtle could beat the rabbit even though he was slow…
My heart was bounding so hard when I knew my first speech meet competition would be held next week at another high school. I didn’t get all my pieces yet so I was so worried whether I was going to make it or not. There was only5days left when I got to read my pieces and practice. Of course I havealot of homework to do ever day but I tried to finish all my homework as quickest I can because my grades are so important to me, and also manage time for speech to practice.
On the day of my first speech meet (Nov 10, 2007), I woke up early and wore my professional outfit then headed to NSHS. There werealot of students that came from many different schools so I wondered who I was going to compete with. One thing for sure was they were all better than me I thought. But I tried to straight my head up when I entered to the competition room. I was called the first one at my 1st round. There were4rounds we have to compete. I knew my hand that I was holding binder was floating but I couldn’t help to stop it. I was so nervous and I wished I could finish early but my story was too long (took me more than 10min).
I felt little comfortable for my next rounds. After4rounds, we had to wait about an hour and half for award time it was the boring part in speech meet) however, everybody was getting butterflies on their stomach when the award ceremony started. I didn’t expect much because I just thought it was enough gaining experience from speech meet so I just sat and listened as I wasn’t belonged to that. Then few minute later, I heard my name was called among the 8 poetry people. Therefore I just went to the stage by telling myself “self, you should be glad even if you just get the last one.” I surprised when they already called people eight to third place but not my yet. There wereathousand thoughts going on in my mind. “Are they just forget me or something after they called me onto the stage?” I thought. Then they paused forafew second before they announced the second place. I thought even when I can meet my secret beloved sweetheart; my heart will not bounce than as it did at that time.
Well I was almost cried when they announced the 1st place champion in poetry was from SSHS. I didn’t believe it at that moment till they came shaking my hand and gave me award slip. It was one of the happiest days for me. Beingaspeech member in school is challenged mealot but finally I did it for ‘1st place” at my speech meet. Then at the following week at my second speech meet, I received 1st place in poetry again.
Posted by မတ်သာင် at 9:36 AM 1 comment:
မတ်ဒိပ်။ ၀ှတ်ဝိန် န၀်ဝေမ်ပါ ၂၄၊ ၂၀၀၇
တၝဲဝွံ အတိုင်ကြက္ကဒိန်ဍုင်အမေရိကာန်မ္ဂး ဒ်ှဂိတုကထိုန်ပေင်တဲု ဗွဲဒဒ်ှအခေါင်လက်ကရၜအိုတ် ကေႜာန်ဗဒ်ှဏာသဘင်လလးကထိုန် ပႛဲဘာမန်ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ၊ ဍုင်ဝှတ်ဝုင်ရောင် မတ်ဒိပ်ဂွံပရိုင်ရ။ ဘာမန်ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ၀ွံ ဟိုတ်နူဒ်ှမံင်ဂတ်ှအခေါန်ကုဪအလုဪသှတွုဪရးအေန်ဒှယာဏာ ကေုာံအလုဪသှဝှေတ်ဒရေ၀်တဲုကီု၊ နူဂိတုန၀်ဝေမ်ပါ(၁၆) တၝဲသိုက်တေံ ဟိုတ်နူကပ်ပလ္ဘှါတႜ လုပ်ဘပဠတဲု ပႜံင်္ဘးဏာကဠာသြန်တဲုကီု ဒ်ှမံင်တင်ဝါတ်ဂါတ် ဗွဲမဂႜိုင်ဂႜင်ကီုလေ၀် တႝဟ်နသဂွံမင်မွဲအာအခိုက်ကႝာညိဂးတဲု ဒးကေႜာန်အာလလးကထိုန်ဝွံရောင်သ်ာဝွံ ကျာ်ဇေႝာ်အ္စာစန္ဒိမာ မြောက်တိုန်ဂလာန်ရ။
သွက်သဂွံရီုဗင်ကျာ်ဇေႝာ်အ္စာစန္ဒိမာ ဂကောံဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန် (၀ှတ်ဝိန်) ကေင်ကေႜာန်လ၀်ကောံဓရီုမွဲဝါကီုလေ၀် လက်ကရၜဏံ ပရိုင်သၝိတ်ဇြအာတဲု ကိစ္စဘာသဂွံပြေပြံင်မာန် ညးမွဲဓ၀် ရုန်ဂစာန်မံင်ရ။ ကျာ်ဇေႝာ်အ္စာစန္ဒိမာဝွံ ဒ်ှညးမဘိက်နိမန်လ၀်သင်မန်ဂမႜိုင် ညံင်သဂွံပတန်သာသနာ ပႛဲဍုင်အမေရိကာန် မပ္တံကုဪ တႜဂုဏ်အ္စာဓမ္မဒိန္န(ဒူရာ)၊ ကျာ်ဇေႝာ်အ္စာပုပ္ဖ(ဘာမန်အနုရာဓ)၊ တႜဂုဏ်အ္စာဣန္ဒသာရ (ကျာ်ရဲ)၊ တႜဂုဏ်အ္စာဝိသုဒ္ဓ (ကျာ်ဇေႝာ်ဘာမြာန်အံင်) တံတဲု ကေင်ရီုဗင်လ၀်ဂကူမန်ဂမႜိုင်လေ၀် နွံတၜဗွဲမဂႜိုင်ကီုလေ၀် ညံင်ရၜဗီုဂလာန်ပေါရဏာံတံဂးစ တႝံဆုဟွံစသတ် ကြုင်ဟွံသုင်ဍ်ာကီု ကျာ်ဇေႝာ်အ္စာစန္ဒိမာမွဲတႜ ရုန်ဂစာန်မံင်အလုဪလုဪဇကုဖိုဟ်ရ။
တေၞင်ဝိသေသ ဒးသ္ပသတိမွဲဂှ် ပႛဲဘသင်လလးကထိုန်ဘာမန်ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ၀ွံ ဂကူမန်တံကႜုင်အောန် ဟွံစုတ်သြန်ကွေံကွေံတဲု ဂကူဗၞာတံဟေင် ကႜုင်စိုပ်ကုဪဇြဟတ်ဂႜိုင်ဂ်ှ ဂွံဆဪုကေတ်ရ။ ဒၞာနူဂ်ှဟေင် ကျာ်ဇေႝာ်အ္စာစန္ဒိမာ ကုဪဏာသှ တွံဏာဓရ် စရိုဟ်ဏာဍာ် ဗတ်ဘာသာဗၞာ သီုဖအိုတ်ရ။ ဟိုတ်နူမန်ကုဪမန်ပ်ါခြာမံင်ညးသ္ကအ်တဲု ဗၞာတံ ကြက်ဂွံဏာဒႝဲာဇကုပႜန်ရောင်ဂှ် ညးလၝုဪတံ က္တုဪဒ်ှမံင်ဓ၀ိင်ရ။
Posted by မတ်သာင် at 8:43 PM No comments:
Walter urges Mon Community to establish small business
MOTSAING: Fort Wayne November 24, 2007 _ Walter Escalante,adistributor of the Royal Prestige Cookware Company, has urged Mon Community to startasmall business. He said Mon Community needed to be strong in finance and his company could help it. He offeredavery good commission for both sale and buy for his company products such as cookwares and other suppliers.
Mr Walter looked more thanabusinessman. He talked about the history of Europe and the independence of America. He said freedom was not cheap and America was not built easily just in one day. Our talk led to about religion. He also shared his points of view regarding religions. He recommended us that we, as the Buddhists, should meditate two kinds of thing: our living and our body. I imparted some Christian ideas about the creation. I said if we were truly created, we should be creative.
I recalled the Speech Tournament held yesterday. Nai Chan Nai, one of the speaker who won the first prize, focused on the twelve religious festivals held at the Mon Buddhist Temple. He pointed out that we, the Mons, too pious and Buddhism was based on individual and it sometimes led us to selfishness. He said he believed that Mon should be Mon-centered so that we would not let anyone lay down.
The second standing person yesterday was Nai Kon Yekkha. He talked about the Mon millionaire, Nai Ok, and compared it to the Nai Saik, MON ASIAN FOOD STORE owner, in Fort Wayne. He warned if we were too individually pragmatist, Nai Saik might lose his store as Nai Ok lost his nine ships to the British and then it effected Mon community badly.
Posted by မတ်သာင် at 4:43 PM No comments:
Some Place-names in Monland (Lower Burma): Pazundaung (ပုဇွန်တောင်=Pujwanthon)
You must have seen, painted on the placards of the omnibuses for Pujwanthon, the picture ofalobster. The picture of the lobster is used, because it is generally thought that the name "Pujwanthon" has some connection with the catching of lobsters. Pujwan (ပုဇွန်) in Burmese means "lobster" and thon (ထောင်) "to catch". In reality, the name is originally Mon and it is spelt Masum duiw (မသုန်ဒိုဝ်) and means "aplace of five hillocks." (Masun=five; duiw=hillock). In colloquial Mon (မသုန်) "masun" becomes (ပသုန်) "pasun", the better 'm' being changed into 'p'.
Also in the case of (တာမွေ) Tamwe, (ဘောက်ထော်) Bhokthau, (ကမာရွတ်) Kamarwat, (မင်္ဂလာဒုံ) Mangaladum and (အင်းစိန်) Ancin, we find that Mon names have become Burmanized.
Posted by မတ်သာင် at 6:15 AM No comments:
Mi Jaw Pkao stood first at the Mon Speech Tournament beating Lulumomom
MOTSAING: Fort Wayne November 23, 2007 _ Three judges namely Nai Saik Lwin, Nai Mot Deep and Nai Mon Jit, have madeabig surprise to name Mi Jaw Pkao as the winner of the Mon Speech Tournament leaving the popular Lulumomom astonishingly.
Posted by မတ်သာင် at 5:41 AM No comments:
Closing Ceremony of Mon Summer School and Mon Speech Contest
MOTSAING: Fort Wayne November 23, 2007 _ A Closing Ceremony of Mon Summer School and Mon Speech Contest was held at the Ramanya Auditorium, Mon Buddhist Temple, Fort Wayne, IN this afternoon. The news in detail will follow soon.
Posted by မတ်သာင် at 5:24 AM No comments:
Some Place-names in Monland (Lower Burma): Kemmendine=(ကြည့်မြင်တိုင်=Kranmrantuin)
...The name "Kemmendine" is Mon in origin, but as the Burmese thought that it wasaBurmese name, the following tale was invented: _
Once uponatime, an Emperor of China heard about the great Shwedagon Pagoda, about the Buddha's relics enshrined the, and about its relic-chamber well protected withaskillful engineering device. He wanted these true relics of Buddha for worship in China. He therefore sent one Chinese hero, Maung Kan, to steal them for him. As Maung Kan had supernatural powers, he entered the earth and travelled undersgourd so that he might not be seen by the guards of the city of Dagum. He came up to the surface of the earthanumber of times in order to find out it he had arrived at his destination. At last he found himself at the place from where he looked round and saw the Shwedagon Pagoda. Hence this name Kranmarantuin (ကြည့်မြင်တိုင်) came into being. Kran (ကြည့်) means "to look", Mran (မြင်) "to see" and tuin (တိုင်) " to reach". Kranmuamtuin (ကြည့်မြင်တိုင်) therefore means "aplace from where one can see (the Shewedagon Pagoda) in full view".
In fact, Kranmrintuin (ကြည့်မြင်တိုင်) originally wasaMon name spelt Kman dun (ကၞာင်ဍုင်). Kman (ကၞာင်) in Mon means "a wall" and dun (ဍုင်) "atown". So it meansa"walled twon". The twon was originallyu inhabited by Mons and the Burmese could not pronounce it as Kranmrantuin (ကြည့်မြင်တိုင်).
By Prof. E. Maung M.A.
Posted by မတ်သာင် at 1:29 PM No comments:
Ethnic leader: Don't be deceived by the Burmese re...
ဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန် (၀ှတ်ဝုင်) ပသဘင်သှကႜှဇေႝာ်...
Some Place-names in Monland (Lower Burma): Pegu (ပ...
ဗော်က္လေင်ဒက်ပ္တန်ဍုင်မန် (၀ှတ်ဝုင်) ပလေ၀်ပလေတ်သွက်ေ...
Some Place-names in Monland (Lower Burma): More pl...
Walter urges Mon Community to establish small busi...
Some Place-names in Monland (Lower Burma): Pazunda...
Mi Jaw Pkao stood first at the Mon Speech Tourname...
Closing Ceremony of Mon Summer School and Mon Spee...
Some Place-names in Monland (Lower Burma): Kemmend...